kudzoka kwaJesu asati kutambudzika | Apg29
Panguva kubvutwa, Jesu anouya kuchechi kwake paanosvika pamugumo kutambudzika, unouya pamwe neungano yake.
Sezvakangoita kereke yaiva chakavanzika chakaziviswa kuburikidza Paul, zvakaitawo pakubvutwa, chakavanzika Kunoratidzwa kwatiri. Shoko rechiGiriki muchivande "Mysterion" apo huvudbetydningen ndiye "chinhu chose chitsva uye haana kare."
A kuzvidavirira nokuda Pre-trib
E N mubvunzo vanhu vakawanda vanobvunza pachavo pachinhu kudzoka kwaJesu apo kubvutwa vatendi chichaitika? Pezvatinotaura matatu unocherekedza yakasiyana nyaya: pre-trib dzidziso, dzidziso nepakati-trib uye post-trib dzidziso. Izvi achadzivirira nokuda pre-trib dzidziso. Ndiko, kuti kubvutwa vatendi kunoitika pamberi kutambudzika kutanga.
Kana pokuuya kwaIshe kune zvinhu zvitatu zvatinofanira kuparadzana. Ndiye zano raMwari nechechi, vaIsraeri uye nokuvaHedheni. Kukanganisa isu kazhinji kuita ndechokuti tikashamwaridzana zvaMwari uye urongwa Israeri, nokuti ungano. Kana ungano runotsiva yaIsraeri uye Ukuwo zvichava zvakaipa. Tinofanira kusiyanisa apo Mwari anotaura Israeri uye kana Mwari anotaura kuungano.
P pamusoro nguva mutemo vaIsraeri, chaiye vatakuri hwaMwari ruponeso urongwa. musoro GT iri Kristu, kuuya kwake ushe - the akanaka, akavimbisa Kingdom, apo Israeri richava pakati vanhu, uye apo nyika yaIsraeri uye Jerusarema richava pakati Wepasi nenzvimbo, enyika uye zvokunamata pakati.
mutemo waJehovha ichabuda Ziyoni, uye mashoko ake achibva kuJerusarema, uye marudzi achamhanyira kwariri. Kururama, runyararo, uye ruponeso kuchatekeshera panyika ino, muumambo ichi rugare, riri Mireniyamu.
Vahedheni uye Assembly
A marudzi tt aizoponeswa, sezvo migumisiro Umambo hwaMesiya igadzirise saka kwakanga kusina chakavanzika GT. Asi Jehovha akanga agadzirira chaiyo utariri wevahedheni, nokutuma Mutsvene panyika, kuitira kuti asarudze vanhu hwokudenga evhangeri yenyasha inova kereke yaMwari, yaiva chakavanzika panguva. Saka, zviri zvakare kwete ungano kutaurwa muTestamende Yekare, uye zvikuru zvakawanda mukudzidzisa kwaJesu.
Ichi chakavanzika chinoshamisa kuti isu vahedheni vava vadyi venhaka zvaMwari, yakatanga vakapfuura nomuapostora Pauro, uyo pachake vakazviwana vari pakuzarurwa kwaIshe. (Efe 3: 3-6, VaK 1: 25-27). The Mutsvene uye Kereke zvakabatana muna upfumi ichi. Mweya Mutsvene ane zvechigarire bolig vakatendeka, mwoyo yeungano, uye ndiye rubatso rwenhaka yedu uppryckelsens mangwana.
The Gungano nguva tiri temberi Mutsvene, temberi chete kuti Mwari anoziva munyika nhasi. Kuti Mweya Mutsvene wakagara panyika, chaizvoizvo mugumo, ndiko kudzivisa kwaAntikristu anogona kumira.
Jesu Kristu Revelation - It nokukurumidza zvichaitika pashure
Up 1:19 - Nyora mashoko pasi zvawaona uye chii uye chii zvichazovapo shure kwaizvozvi.
O Rdet "pashure" ndiro shoko rechiGiriki Meta tauta, izvo zvinoreva "pashure izvi" .
Ichi chinhu chinokosha ndima weboka yose kuti Zvakazarurwa rakanyorwa. Pashure paizvozvo John rave akabvumira kuti tarira chiono chokudenga Jesu, anodzidza kuti anofanira kunyora pasi:
1. Kuti zvaakaona. 2. 3. zvinofanira kuitika shure kwaizvozvi. Nemamwe mashoko rimwe matatu kwava weboka Zvakazarurwa.
In chitsauko 1: 12-16 anoona John akaona Jesu akapiwa mbiri amire pakati pezvigadziko zvemwenje zvendarama (7 parishes), pamwe nyeredzi nomwe muruoko rwake (7 parishes ngirozi). Anoona Jesu akapiwa mbiri, uyo uyewo Risen Ishe kukunda weKarivari. Iye anoona iye sezvo akakudzwa Mwanakomana woMunhu, sezvo gwayana, shumba yerudzi rwaJudha, uyo mukuru mutongi, uye Mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe.
D T ndiyo muchidimbu kwenguva Assembly urskillnings, yakavakirwa ouprofita uye nhoroondo yekufamba kwenguva, vose vari muungano pakuzvarwa kudzoka kwaJesu. 7 tsamba vaimiririra ungano uye ayo shanduka zvokunamata kuburikidza rinhi inotevera yekubvutwa.
Tsamba yokutanga akatumira ungano yeEfeso anomiririra ungano kokutanga, kureva yevaapostora. The nomwe uye pakupedzisira tsamba akatumira ungano vaRaodhikia. The rima romudzimu kuti mubumbiro tsamba ndiyo rondedzero pamusoro yokupedzisira chaiyo pamberi Jesu anodzoka. magumo-nguva yechechi kuti ungano veRaodhikiya.
3. Uye chii deko kuva kwaizvozvi
O Rdet "pashure" ndiro shoko rechiGiriki Meta tauta, izvo zvinoreva "pashure izvi" . Kureva sequentially pashure zera remakereke, izvo anoratidzwa kuburikidza 7 tsamba.
Rev 4: 1 - teverei (kureva, kana nguva iyo Assembly panyika iri pamusoro, uye rave simba rizere), ndakaona, uye tarira, kufa yakavhurwa kudenga, uye inzwi ndakava pakutanga akanzwa achitaura neni, serinenge rehwamanda , akati: " Kwirai pano ., uye ndigokuratidza zvinofanira kuitika shure kwaizvozvi" (kureva, mushure zera remakereke) iMWE ndakauya muMweya, uye tarira, chigaro cheushe akamira kudenga, neumwe agere pachigaro cheushe.
Heunoi Assembly kubvutwa kubva 1 VaTesaronika 4:16, kufanana chizaruro John akagamuchira. Inzwi rakasimba, nehwamanda yaMwari uye kubvutwa. A zvakafanana yakanaka! John paanoita mumweya kuona kubvutwa chechi kuti hunomiririrwa vakuru 24 vakapoteredza chigaro choumambo.
Tinowana "screanshot" yokudenga muChitsauko 4 uye 5, riri shure pakubvutwa, asi pamberi kutambudzika panyika. Kubva Chapter 6 tiri shure paNyika, uye Johane anoona shiri retsono maonero kutambudzika vakaridza panze Panyika muChitsauko 6-19.
Vakuru 24 vakapoteredza chigaro
T reviously ini vaitaura kuti vakuru 24 vekereke rinomiririrwa mudenga kubudikidza pakubvutwa pamberi kutambudzika. Tinogona kutanga kutevedzera mashoko chete ndivo nevakuru 24 uye zvipikirwa kuna Assembly:
Anovimbisa kuti Saints
Ndakagara pazvigaro zvoumambo (Zvak 4: 4.11: 6
Vane nguvo chena (Zvak 4: 4)
Korona yake (Zvak 4: 4,10)
Ko madzimambo (Zvakazarurwa 5:10
Vapristi (Zvak 5:10)
Zvigaro (Mateu 19:28, Zvakazarurwa 3:21
White mbatya (Zvakazarurwa 3: 4-5)
Crown (1 mhou 9:25, Lane 4: 1,2)
Madzimambo Lovemore (Zvak 1: 6, 2:26, ​​20: 6)
vapristi Lovemore (Zvak 20: 6)
Muna Zvakazarurwa 5: 9, saka nziyo vakuru 24 rumbo rutsva Kristu uye gwayana rechibairo:
ndima 9 Vakaimba rwiyo rutsva, "Ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa nokuzarura zvisimbiso zvaro, nokuti iwe vakauraiwa, uye neropa renyu yamakatenga Mwari vanhu kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu norudzi. V.10 Makaita navo kuti vave umambo nevapristi kuna Mwari wedu, uye ivo vachabata ushe panyika. "
S nguva zhinji pamberi, kwave zvikanganiso mududziro kubva mumagwaro ekare echiGiriki. Pakati pezvimwe zvinhu, KJV inobva ruzhinji echiGiriki anoshandurwa seizvi pachinzvimbo:
ndima 9 Vakaimba rwiyo rutsva, "Ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa nokuzarura zvisimbiso zvaro, nokuti iwe vakauraiwa, uye neropa renyu yamakatenga kwatiri Mwari kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu norudzi. V10 Makatiita madzimambo nevapristi kuna Mwari wedu, uye tichatonga panyika. "
D E vakuru 24 vazivikanwe pamwe vatendi, uye naizvozvo vose vakaregererwa vanhu makaponeswa nokutenda muna Jesu Kristu panyika. Vari kudenga kubva pakutambudzika kutanga kare apo tanga kutanga mucherechedzo.
Kutorwa aiva chakavanzika
1 VaKorinde 15:51 - Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika: Hatizorari tose, asi tose tichachinjwa, kamwe kamwe, muna nekubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira.
P recis kuti chechi yaiva chakavanzika chakaziviswa kuburikidza Paul, zvakaitawo pakubvutwa, chakavanzika Kunoratidzwa kwatiri. Shoko rechiGiriki muchivande "Mysterion" apo huvudbetydningen ndiye "chinhu chose chitsva uye haana kare."
Tinoona hapana häntydningar kuti uchabvuta mutestamende yekare, uye zvinoreva kuti Jesu haana kudzidzisa kuti pakubvutwa, asi chete rake rinooneka kuvaIsraeri. Kutorwa aiva chakavanzika rakatevera Pauro anoudza mberi chizaruro kuti Mwari akapa kwaari. Kutorwa akarondedzera 1 VaK 15 uye 2Thes wechipiri
The kwevhiki 70 dzemakore
P rofetian Dhanieri anofukidza vhiki 70 iri betydningsfull mufananidzo yekufamba weIsraeri yenhau uye ouprofita, izvo kunosvika zvachose kubva pakutapwa neBhabhironi kuuya kwaKristu wechipiri saMesiya waIsraeri.
Dan 9:24 - manomwe mavhiki dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene kuti agumise kukanganisa, momisa zvivi, nokuyananisira mhosva, igozvara kururama kusingaperi, kupedza chiratidzo uye uprofita, uye nokuzodza Mutsvene tsvene.
The 70 uye yokupedzisira vhiki makore ane nevaIsraeri uye vanhu vechiJudha kuti vaite uye kwete ungano. In Dan 9:24, tinogona kuona kuti vose vhiki 70 dzemakore ane navanhu vechiJudha uye Jerusarema kuita. Sezvakangoita vhiki 69 okutanga haana chinhu kuungano kudaro asina wokupedzisira vhiki dzemakore ungano kuita.
Israeri uye nyika
D munhu wokupedzisira vhiki makore riri kutambudzika sezvinorondedzerwa Chapter Up 6-19, uye ndiye chiito kwaMwari nevaIsraeri uye nehondo iyi. Kereke ndiyo chikomboredzo iro riri pakati 69th uye vhiki 70 dzemakore, inorondedzerwa mundima 26 - asi kuguma anouya yemafashamo. Kuti kuguma kuchavapo hondo. The kuparadza yakatsunga.
Mwari haagoni kupedza chirongwa chavo pamwe Church uye Israeri asati azadzisa mibatanidzwa gadziriro navo.
Church zera migumo
A lltså Mwari, tisati kupinda okupedzisira vhiki dzemakore, kupedza ratinoti zera remakereke, kwakatanga paPendekosti, uye kwemakore 2,000. Kana Mwari zvakanaka vapedza zera remakereke, Mwari anogona kuramba 'chirongwa naIsraeri. "Zvavo
sungano yake neIsraeri anogona chete kuzadziswa okupedzisira makore manomwe uprofita hwaDhanieri. Kana zvaMwari vaIsraeri wako isiyo, ndiye Mwari bedzi anogona kuzadzisa navo. Muna VaRoma chitsauko 11, Pauro anotsanangura kuti Mwari anofanira kugumisa chirongwa dzaro chechi asati mberi urongwa hwake nevaIsraeri.
Mabasa 15:14 -16 - Simioni arondedzera sei Mwari pakutanga nechokwadi akakunda vanhu vezita rake pakati pemarudzi (NT-Assembly). Hazvina inopindirana nemashoko avaporofita, iyo inoti: Pashure ndizvo inotonhorera ndichadzoka uye vanovakazve tende vafa waDhavhidhi.
V nokuona sequential kuyananisa muna raJakobho. First akauya zera remakereke, uye ipapo, iye unenge nokuvakazve tende vafa waDhavhidhi.
Kutambudzika ari kugadzirira vaIsraeri pamberi Millennium. Israeri achakwanisa kusarudza pakati kwaAntikristu uye Kristu. Pakutambudzika mutongi Mwari waIsraeri apo kukoka vanhu vechiJudha muushe hwaMesiya. hasha dzaMwari huchaunza Israeri uye marudzi pachake uye kutendeuka.
Day waShe Jesu Kristu nhasi
Pano tinotarisa itsva Church, uye kunyanya panguva yekubvutwa Gungano iri pamusoro betydning zvikuru kuti tizive musiyano pazuva raShe Jesu Kristu nhasi. Pakutanga kubvuma, ingaratidzika semari zviri kutaura zuva, asi chokwadi ndechokuti mazuva ano "maviri" vari akasiyana zvachose unhu uye zvakasiyana zvachose kugutsikana kuti yokuguma.
Zefaniya 1: 14-16 - Jehovha zuva guru riri pedo, pedo, uye zvichakufambira nokukurumidza. Teerera, ndiro zuva raJehovha! Zvadaro anoshevedzera magamba mwoyo. A zuva rokutsamwa zuva, zuva nokurwadziwa nokumanikidzwa, zuva chakaparadzwa uye nokuparadzwa, zuva ramakore maumi, rimwe zuva apo kurira nyanga vachidanidzira achitsutsumwa pamusoro rakavakirirwa murtornen ...
2 VaTesaronika 2: 2 - Kana totaura Ishe wedu Jesu Kristu uye kwedu vakaungana kwaari, tinokukumbirai, hama, kuti murege pakarepo kurasikirwa chinzvimbo chake uye akatya, kana mweya kana neshoko kana netsamba, purporting kuva nesu uye kuti kunobva zuva raShe yasvika.
N ndiro zuva raShe kana, kutsamwa uye domstid kuti achabuda pamusoro penyika munguva nguva kubvira kubvutwa (kutambudzika kutanga) uye Mireniyamu. Jesu Kristu nhasi haataurwi muTestamende Yakare, sezvo ane pamwe chaiko chakavanzika kuita, kureva chokwadi itsva chechi, uye kubvutwa kukudzwa.
Jesu Kristu nhasi kunongova yetestamende itsva. Day raShe haisi yekare zvakazarurwa, asi dommens nguva marudzi ane uwane mutestamende itsva uye anorondedzerwa kunyanya Zvakazarurwa ganhuro 6-19. "Zuva raShe" pamusoro penyika uye vanhu panyika apo Jesu Kristu nhasi pamusoro NT Assembly kubvutwa uye kugadzirira pamberi Baba vari kudenga.
Kana totaura Jesu Kristu nhasi, ndiko benämnelse pazuva apo Jesu achauya ari pamakore kuti simba ungano zvakazara pachake.
VaFiripi 1: 6 - Ini ndiri chokwadi kuti iye wakatanga basa rakanaka mamuri nemiwo munofanira ucharizadzisa kusvikira pazuva raJesu Kristu.
B etydningen kwendima iyi kuti Mweya Mutsvene paPendekosti akatanga basa rake kusarudza vanhu kudenga, achaita zvizere tora uye kuti ichi vanhu zvizere simba anotevera Jesu Kristu nhasi, kuti pedyo Jesu auye kumba ungano yake yokudenga dzimba - izvo saka anotora nzvimbo pamberi zuva raShe.
2 VaTesaronika 2: 1-12 - The chechi muTesaronika vakanga vava kutya nevadzidzisi venhema vakanga vachidzidzisa kuti zuva raShe, nezvose inoreva hasha uye kutambudzika akanga atanga. Kunyange sokunge munhu akanga atuma nyepera tsamba uye akazvipa kuna Pauro, kupa tsamba simba. Pauro anonyevera zvakasimba pamusoro dzidziso yenhema iyi, uye anotanga kudzidzisa chokwadi pamusoro ichi "zuva raShe."
Chokutanga, Pauro muna 1 VaTesaronika 1:10 akavimbisa ungano kuti Jesu aizovaponesa kubva pakutsamwa kuchauya, nei kuvhiringidzika ravo zvokuti mukuru apo pakarepo vakafunga vari pakati payo. Paul anzwe uye rinopa neungano zuva raShe havagoni atanga munhu chivi, kuti kwaAntikristu kunge kutanga yakabuda, uye kunosimbisa kuti izvi hazvigoni kuitwa asati "Unorega" akatanga zvabviswa panzira. (First Kubviswa), Danish shanduro)
Ndiani kana chii anodzora?
V anovenga 4-8 buritsa kwaAntikristu, uye uya anomutsigira shure kuitira kuti anogona kuuya mberi. Nhasi, tinonyora 2013, uye tinogona kugumisa kuti / uyo anomudzivisa ichiri pano kana kwaAntikristu haana kuuya mberi asi. Chii anochengeta zvakare rinova zvose se "nayo" uye "iye". Shoko mweya Mutsvene ishoko "pneuma" muchiGiriki. Pane shoko intetkön.
Chokwadi kuti Mutsvene panguva iyoyo ndiye Mwari, iye hunorondedzerwawo se "iye". Pane zvave kufembera akawanda chii chiri dzakabata kwaAntikristu, asi kuti vose neuter apo rume kuva kunze Mutsvene. Mweya Mutsvene hunonyatsobatana kuchechi, uye rave kubvira paPendekosti Acts 2nd In GT aiita Mutsvene panyika, asi pachinzvimbo kubva pamusoro. Sezvo achaita pakutambudzika.
D Mweya Mutsvene anouya pakutambudzika ucharamba uchishanda muvanhu asi kubva uppryckelsens duku kubva kumusoro. Naizvozvo isu havaoni Mutsvene hunomiririrwa Chapter 3 chebhuku raZvakazarurwa. In tsamba kukereke nomwe, tinonzwa mashoko aya: Uyo ane nzeve, ngaanzwe zvinoreva Mweya kuungano. Mushure Chapter 3, inova kubvutwa Gungano iri asisiri Mutsvene anotaura. Zvakazarurwa 13: 9 - Ane nzeve, ngaanzwe . Kana Mweya Mutsvene unouya pamwe zvakasiyana ruponeso uye mashoko kutonga vanhu vari kutambudzika, zvichaitwa nengirozi. ( Zvakazarurwa 14: 6-7 ).
Apo Assembly inofambidzana akabata Mutsvene haana nzvimbo kushanda kubva anopfuura Assembly itemberi chete kuti Mwari anoziva nhasi. (1 3:16). Kereke chete kuti anomiririrwa pakutambudzika riri skökoförsamlingen, uye dai Mweya Mutsvene asingashandi kubva.
Waste kana kuenda?
2 VaTesaronika 2: 3 - ..Ty chokutanga, tsvina inofanira kuuya uye munhu asingateereri mutemo, mwanakomana wokurashika, uyai pachena mberi
D and shoko rechiGiriki rakashandurwa dongo, shoko "apostasia". Shoko "apostasia" rinobva pashoko rechiito "afistemi" vane huvudbetydning iri "ichifamba" kana "kutama chinhu kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe." Shoko rinoshandiswa zvakananga maererano chero kufambisa kubva panzvimbo imwe neimwe, kana kana Oenda kana rakasiyana munhu.
Shoko ringashandiswawo nezvichaitika dzechitendero chokunyengedza kana tsvina kuti anotsanangurwa 1 Tim 4: 1. Vamwe rokutanga vashanduri Protestant Bhaibheri akasarudza kushandura Chirungu shoko "kuenda", izvo zvinoreva kuti kuenda kana kubviswa.
Mamwe inozivikanwa mushanduri weBhaibheri uyo rakashandurwa mashoko kunyangarika / ndiende inosanganisira Kenneth Wuest, Genovabibelen, John Dawson, Coverdale, Crammer etc. Ungada mushanduri akashandisa shoko rokuti "kuenda" pane tsvina kuti pachena kupa yakajeka zvikuru pachinhu pakubvutwa uye kutambudzika. It aidawo kupa zvakawanda pfungwa pachinhu kunzwisisa teksten kubva 1 VaTesaronika uye 2 Thessalonians.
Assembly haafaniri kupinda pakutambudzika kana vanotambura kutsamwa kwaMwari
Up 6: 16-17 - Zvino akati kumakomo nokumabwe, "Wirai pamusoro pedu uye mutivige kubva kuti anogara pachigaro choushe uye kutsamwa weGwayana chiso chake. Nokuti hasha dzake zuva guru rasvika, uye ndiani angamira?
Rev 15: 1 - Zvino ndakavona chimwe chiratidzo chikuru uye chinoshamisa kudenga: Vatumwa vanomwe vane matambudziko manomwe ekupedzisira, nekuti kutsamwa kwaMwari kunosvika kuzadzika.
V kusvikira kuedza kwakafanana zuva raShe, izvo zvakafanana hasha dzaMwari. The yose Tribulation kutsamwa kwaMwari, uye kwete chikamu den.Vi anogona kuona kuti kare panguva 6 chisimbiso saka akaita hasha weGwayana wasvika. In Chapter 15, tinoona kuti hasha dzaMwari vachava akapedza vane matambudziko manomwe ekupedzisira. Zvinoreva kuti hasha dzaMwari haana kutanga kwake matambudziko manomwe, asi kutanga yapfuura.
Vane matambudziko manomwe ekupedzisira anopedzisa kutambudzika uye nehasha dzaMwari. In VaTesaronika 1: 9-10 taka vimbiswa kumirira Jesu kubva kudenga (kubvutwa), zvakafanana kuti Akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya.
1 VaTesaronika 1: 9-10 - uye mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo akamutswa naMwari kubva kuvakafa, Jesu uyo ​​Akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya.
1 VaTesaronika 5: 1-9 - ndima2 munoziva kwazvo kuti zuva raShe (kutsamwa / kutambudzika) richauya sembavha usiku. V.9 - Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti tive vokutsamwirwa asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
D mumwe chikamu zvatichangobva kuverenga unofadza zvikuru. 1 VATESARONIKA chitsauko 4:13 Kuvira riri pamusoro Assembly kubvutwa uye kusangana naJesu muchadenga. Paul anoisa shure kubvutwa pachinhu pokutambudzika zvichabviswa vanorondedzerwa Chapter 5: 1-3.
Anoenderera mberi achitsanangura kuti zuva, kuti zuva raShe havagoni kutishamisa sembavha nokuti tiri chiedza. Anoguma zvose paakavimbisa kuti kutambudzika iye akadzidzisa, uye zvinoita kuti hatidi goko kutsamwa, asi ruponeso kuburikidza naJesu.
F ari wadhi Philadelphia, achimiririra mumwe maviri yokuguma machechi akanga avimbisa kuti achengetwe paawa mumuedzo, zvichazoitika pamusoro yose. Chipikirwa ichi mumwe akasimba vimbiso kereke achaitwa kubvutwa akabata wokupedzisira vhiki dzemakore.
Zvakazarurwa 3:10 - Nokuti iwe vakachengeta shoko rangu nezvokutsungirira, ndicharamba iwe achikuponesai kubva paawa mumuedzo, zvichazoitika pamusoro nyika yose uye kubudisa vanhu vayo kuti bvunzo .
Shoko rechiGiriki kuchengetedza shoko rechiGiriki (kuti redhiyo). Rechiito rinoshandiswa kaviri mundima iyi. nguva yokutanga zvichaitwa kushandurwa kuchengetedza , asi kechipiri kukuponesa mududziro Swedish. Muna KJV ndiye zvose mashoko akashandurwa kuchengetedza uchipa yakasiyana zvachose betydning:
10 Nekuti wakachengeta shoko rekutsungirira kwangu, ndichakuchengetawo akuchengete paawa mumuedzo, chichaitika yose, kuidza vanogara panyika. (King James Version)
Thayer anoti kana shoko iri kushandiswa shoko rechiGiriki "mumwe", zvinoreva kuti "kumira zvakasimba chimwe chinhu," asi kana rinoshandiswa ne "pomuouki" zvinoreva sezvinoitwa shanduro King James ave "akachengetedzwa kubva". Saizvozvowo, "memuouki" kushandiswa kana rakashandurirwa muna 1 VaTesaronika 1:10 - .. uyo Akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya. John aida kuratidza kuti yakanga "awa mumuedzo," akanyora kudaro, "imwe tii mhombwe". Pane vasarudze John kunyora "Ek tes timer" izvo chete zvinoreva " kubva awa yomuedzo"
Nokuti uyo ari ekutambudzika?
Zvakazarurwa 3:10 - Awa mukuedzwa, zvichazoitika pamusoro nyika yose uye kubudisa vanhu vayo kuti bvunzo .
A tt awa yomuedzo kuratidza kutsamwa kwaMwari uye chii kuchauya tsika, vakawanda vanobvumirana. Asi nei ndichakuvadza? Ko kuedza uye kuchenesa ungano? Kwete, zviri kuisa navageremo, munyika yose, kuti bvunzo. Izvi nechinangwa vanhu vakasara panyika mushure pakubvutwa, uye akabatana kwaAntikristu.
Shoko "vagari vayo" (katoikeo), iro rinoshandiswa pano ishoko rakasimba. Shoko iri pamusoro chinhu zvechigarire uye kugara. Izvi zvinoreva kuti kutongwa vaya ndakaita nyika kumba kwavo kwechokwadi, uye anozivisa pamwe Earth zvokutengeserana uye zvechitendero. Vakaita nyika kumba kwayo zvachose, zvisingagone zvichida kureva Assembly.
Church The yechokwadi rinoumbwa vaeni navatorwa panyika ino. (1 Pet 2:11), uye kutsvaka Wekumusoro soro (VaK 3: 1-2) kuva nyika yavo mudenga (Efe 2:19), uye kuva musha wavo mudenga (Johani 14: 2) .
Tit 2:13 - Takamirira tariro yakaropafadzwa naMwari wedu mukuru uye Fräsare Jesu Kristu kuzviratidze pakubwinya.
D hapana mubvunzo kuti tarisiro yedu T iri uye mufaro wedu kuuya kwaJesu. Hatifaniri kumirira kwaAntikristu, kutambudzika uye nehasha dzaMwari. Kana Jehovha aifunga kuti vanhu vake vakanga vachienda pakutambudzika uye kwaAntikristu imba, akanga akanyeverawo uye vakagadzirira ungano yake pamusoro payo. Nokuti kana zvikadaro, kwaAntikristu kuuya mberi pamberi pakubvutwa chingaitika.
D and Uyewo evhangeri yenyasha kuti achaparidzwa pakutambudzika, asi vhangeri roumambo. vhangeri Izvi yakaparidzwa 144-000 vasanangurwa vaJudha achazviti Mesiya kudzorerwa umambo hwaMesiya. Gospel chenyasha sezvo tinozviziva zvichazadziswa muzera kuti chechi yapera.
The vakafira kutenda Mwari kuti pachavo vatsive vavengi vavo. Izvi zvakare haana uchapupu mutendi ari Assembly chapera. Hatibvunze Mwari kutsiva vavengi vedu, tinokumbira Mwari kuti aponese vanhu vose. (VaRoma 12:19) The zvapupu zviviri zvakare kuwana simba kutsiva uye kuranga vavengi vavo.
F örsamlingens kubvutwa aiva chakavanzika rakatevera Pauro akasimuka Wakapfuurira kune Assembly. Saka, hatina kunzwa Jesu akadzidzisa pamusoro yekubvutwa. Jesu anoparidza pakumuka nezuva rekupedzisira, uye ayo vanooneka kuvaIsraeri.
Dan 9 inoratidza zvakajeka kuti 70 vhiki dzemakore ari Israeri uye Jerusarema haisi ungano.
By vhiringidzai naMwari chirongwa Israeri uye Chechi achava zvakaipa. Kuburikidza magwaro akawanda, Ishe anotivimbisa kuti chechi haisi scalable kutsamwa, asi kuponeswa kubva pairi. Hasha kana kuti zuva raJehovha riri rose yemakore manomwe. Naizvozvo Gungano anofanira kubvutwa wokupedzisira vhiki dzemakore isati yatanga. Sezvakangoita ungano Filadelfia kuti achengetwe kubva paawa yomuedzo.
Pashure Chapter 3 Bhuku raZvakazarurwa, tinoona vasisiri ungano zvitsauko 6-19 riri kutambudzika kwemakore manomwe. Tinotarisa kana Mweya Mutsvene, uyo hunonyatsobatana kuchechi. Kana Mweya Mutsvene anogara mukati vakaponeswa chabva panyika, zviri pachena kuti kwaAntikristu uye imba yake. Kereke chete kuti iri akadzoka ndiye hure.
Tinoona hapana uchapupu hwokuti Assembly vanofanira pakutambudzika, asi nekusiyana, ichengetwe pairi. We goko vakamirira kuti Jesu Kristu nhasi vanogara yedu. Kutambudzika, kana nhamo raJakobho riri kune vaya vanogara panyika. Israeri uye vaJudha ichamboedzwa neimwe nzira kana vachida kuziva kuti Jesu ndiye Mesiya, kana kuti kwete. Munhu Anopesana naKristu panguva yake tende Mwari ndiye vo Township. The chechi rinomiririrwa mudenga kunyange pakutanga kwokutambudzika nevakuru 24. Apo Ishe anodzokera panyika Zvakazarurwa 20 sezvo Assembly, pamwe nengirozi.
Jesu ari kuuya nokukurumidza!
D and iri kuenderera yokutanga romukova "kudzoka kwaJesu asati kutambudzika," izvo saizvozvowo chitaviridzo nokuda Pre-tribläran zvinoreva kuti kubvutwa vatendi kunoitika pamberi kutambudzika. Tinowana zvakawanda zvikuru kodzero kuti mhinduro iri yekare kuti vari mienzaniso iri pakubvutwa, kutambudzika uye munguva dzatiri kurarama. Ndinoda kuratidza zvimwe kodzero iri mhinduro kubva GT anogona kuona uye kusimbisa kubvutwa pamberi kutambudzika.
N ari kutaura nekutambura tinofanira kutanga kusiyanisa mukuru kutambura tinosangana munyika (gr.thlipsis) uye kutambura tinosangana pakutambudzika kukuru (gr.Thlipsis Megas) Jesu anotaura muna Mateo 24, uye Daniel muChitsauko 12. munyika ino vatendi vechokwadi vachaona hondo yezvokunamata namasimba, nyama yavo, uye nokuda kwevhangeri. Kuti mhando kutambura, Jesu haana Akativimbisa kuti tichasunungurwa kubva. The hasha tinosangana pakutambudzika chinhu chakasiyana uye chinhu kuti shoko akativimbisa kuti hatifaniri kuona kana ichipfuurapo.
Munguva pfupi yapfuura Mwari hasha akatanga kuva zvakasiyana betydningar vanhu. Rinotaura kutsamwa reGwayana, kutsamwa Romunhu, kutsamwa kwaSatani uye kutsamwa kwaMwari uye Inovhiringidza nayo. Panewo vasingabvumirani pamusoro zvose kutsamwa kwaMwari kunoitika apo uye sei.
Muna Zvakazarurwa, tinogona kuona kuti kutambudzika rinotanga muChitsauko 6 matanhatu zvisimbiso zvokutanga Anozoganhurwa Gwayana uye rinopera yaMwari vanomwe ndiro yokutsamwa muchitsauko 16-18. Nechekare munguva matanhatu zvisimbiso wokutanga, tinoona kunoparadza kukanganisa upenyu Panyika. The matanhatu zvisimbiso naMikari hondo, nzara, hosha, uye zvinokonzera rufu kota vepasi. Nemamwe mashoko, vanhu vanenge mabhiriyoni 1,7 achafa panguva matanhatu zvisimbiso vokutanga. Mumativi ichi kuchava kutenda vanhu vanova vatendi munguva yokutambudzika.
Apo ngirozi ichivhuvhuta hwamanda nomwe saka kunokonzera otomatiki itsva tsotsi nechokwadi enyika. Vatongi ava anosanganisa simba dzinongoitika dzoga pamwe zvemweya nematambudziko. Apo hwamanda nomwe vakagadzirira nokurwadziwa kwavo saka vave chetatu mvura rakaparadzwa, chetatu zvose upenyu mugungwa chikafa, uye chetatu nyika ichaparadzwa nemoto, uye chetatu vanhu vakapunyuka matanhatu okutanga zvisimbiso vachafa. Nemamwe mashoko, chimwezve vanenge mabhiriyoni 1,7 vanhu vanogara panyika.
Hasha nembiya rinopedzisa kwaMwari mutongo magumo
V muna haana kutaura kuti vanhu vangani vachabvumirwa kuuya upenyu kutsamwa ndiro asi tinogona chete zvokufungidzira. Jesu pachake anoti kana nguva iri pfupi hapana wenyama kuponeswa, (Mateo 24:22). Izvi kutsamwa kuri kunze decription zvose, uye zvakaoma kunzwisisa migumisiro kana betydningen wavo.
ndiro izvi hasha anova okuguma kwaMwari magumo. Rev 16: 16-21 inotaura rakakura zvakadaro kudengenyeka kuti hakuna kumbobvira ambova chinhu chakadaro. Mhedzisiro zvahuchaita saka zvose pazvitsuwa inokurumidza, uye makomo haachazovipo. ini tenda kana ndinoti kuti hapana anoda kuva panyika panguva iyoyo.
Kutambudzika iri pasi hasha dzinouya
M N nemamwe mazwi, ndiyo nguva yokutambudzika kana hasha dzaMwari kunoratidzwa uye hainyadzisi pamusoro penyika yose. Kutsamwa hakusi nyore zuva, sezvakanga zuva raShe hazvisi kana. hasha dzaMwari, hasha, zuva raShe, hasha uye zvichingodaro. ndiyo nguva kuti kunotanga chisimbiso chokutanga wakaputsika uye kuchaguma Jesu zvinoonekwa kuvaIsraeri uye nyika, apo hasha dzaMwari imwiwo muchaonekwa.
Pauro akajekesa kuti Assembly haana kuva panyika munguva iyi mutongo kuzviuraya kuti kutambudzika kuri. Muna 1 VaTesaronika 1:10 Pauro anotaura kuti Ishe achatiponesa kubva pakutsamwa kuchauya. Shoko kubva anokosha murugwaro zvinoreva nokutora nyaya zvose nguva uye nzvimbo, saka kuti isu mune mamwe mazwi, haangavi aripo pazvinoitika. Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti tive vokutsamwirwa asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
Kutsamwa kwaMwari kunogara kutambudzika yose
N zviri pamusoro kutsamwa kwaMwari saka kazhinji kunongedzera vanhu kuti hazvina kufanana kukuru, uye vari zvachose zvakarurama. Kutambudzika kukuru 3.5 makore kutangira nyangadzi yekuparadza uye nehasha dzaMwari kana kutsamwa runogara munyika kwokutambudzika kwamakore manomwe.
Up 6: 16-17 - "Wirai pamusoro pedu uye mutivige kubva kuti anogara pachigaro choushe uye kutsamwa weGwayana chiso chake. Nokuti hasha dzake zuva guru rasvika, uye ndiani angamira?
Rev 15: 1 - Zvino ndakavona chimwe chiratidzo chikuru uye chinoshamisa kudenga: matambudziko manomwe ekupedzisira, nekuti kutsamwa kwaMwari kunosvika kuzadzika.
Pano tinoona kuti kunyange panguva chisimbiso chechitanhatu saka ane hasha weGwayana wasvika, izvo zvakafanana hasha dzaMwari, apo Gwayana uye Baba ndivo chete munhu. Kazhinji, sezvo iri akanongedza kuti manomwe okupedzisira matambudziko - anova kutsamwa kwaMwari kutsamwa kwaMwari. Asi muchitsauko 15: 1 tinogona kuona kuti hasha dzaMwari runosvika pokuguma pamwe okupedzisira nematambudziko awa, kuti haisi kutanga kwayo. Ndizvo chete Kupedzwa kutsamwa kwaMwari nguva anopera okupedzisira matambudziko manomwe.
Kuponeswa kubva nguva uye nzvimbo
A Braham Ishe akayeuchidza avo nharo pamusoro peSodhoma zvaizopesana hunhu wake kuparadza vakarurama pamwe nevakaipa (1 Eksodho 18:23).
Peter inotidzidzisa kutipa muenzaniso Roti kuratidza kuti Roti akanga asiri kwekanguva Somuenzaniso, asi musimboti kubva kudivi raMwari, kuti Ishe "anoponesa vanonamata Mwari pamiidzo" shanduro Chirungu: Ishe anoziva kuti anonunura sei miedzo nokuzvipira asi kubva ". Shoko From (kunze) zvinoreva nguva uye nzvimbo chiitiko ichi.
F Ragan ndechokuti tinogona kuwana mashoko Ishe vanotaura kunyaradzwa kana yambiro kune mwenga wake vakatarisana hasha dzinouya? tinogona kuwana mashoko Anovimbisa kudzivirira uye kuchengetedza nesu kuburikidza ichi nguva inotyisa kutambudzika kuri? Tingavanzwisisa sei kuona kuvapo Gungano pakutambudzika?
Kwete, hatingadaro! Just nokuti hänvänder vaIsraeri kana ungano raenda, uye anogona kuchengeta ayo chirongwa Israeri mumazuva okupedzisira vhiki dzemakore, achiri isu anovimbisa kuti hatifaniri kuti kukanganiswa pakutsamwa kuchauya.
Matthew 24:37 - Nokuti sezvo mazuva aNoa, ndizvo zvichaita Mwanakomana womunhu achiuya.
H Erren anoda kudzidza Noa uye enzanisa nokufamba kugumiswa. Muna Mateo 24:37 tinoverenga kuti zvakafanana sezvo zvakaita mumazuva aNoa akararama zvichava paKudya kwaShe kudzoka. Chii chatingadzidza kubva raNoa nenguva asati Mafashamo, Mafashamo nokudzivirira ruoko rwaIshe pamusoro Noa nemhuri yake.
Jesu anoenderera mberi kutsanangura kuti vanhu vachapona pakutambudzika ichakwanisa kutongwa pamberi 1000 gore umambo. Vamwe vachapiwa kubvutwa mukutongwa uye kubvumirwa kupinda umambo hwaMesiya. Saizvozvowo sezvinoitwa mafashamu, vanhu vachaitwa kubvutwa mukutongwa. Vanhu vomuzuva raNoa akaenda pasi nokuda mafashamo, uye saizvozvo, vanhu vachaparara pakutambudzika, uye straks pashure naJesu pakutonga.
mhando nhatu vanhu
D and vaiva yakasiyana siyana matatu vanhu vaigara mumazuva aNoa mafashamu asati asvika. Maiva vasingatendi vakaramba shoko raJehovha, uye vose vakaparadzwa mafashamo. Yaiva Noa nemhuri yake vakachengetedzwa kuburikidza Mafashamo, uye aiva Enoki akanga ndokutorwa kumusoro kuna Ishe mafashamu asati asvika. Mumwe nomumwe nenzira yavo inomiririra vanhu ivavo Mapato matatu akasiyana kuti isu angaenzaniswa nguva yedu nhasi. In chete Saizvozvowo tinoona mhando nhatu vanhu pazuva kana tiri kutamira akananga kutambudzika uye kupedza nguva:
· Vanhu vakaparadzwa mafashamo raNoa rinomirira vasingatendi, vasina kubatwa kuna Jesu somuponesi yavo. vanhu ivavo vachaenda kutambudzika, uye pachena hasha dzaMwari. Avo vasingadaviri apfidze yeKutambudzika vachatongwa naJesu uye ipapo ugokandwa romoto romoto.
· Noah anomiririra vakasara vaIsraeri kuti Jehovha kupedza mhiko dzavo-makore 1000 Reich. Noa saizvozvo vakatsaurwa kuvaIsiraeri, izvo mune imwe nzira achadzivirirwa munguva yokutambudzika. Makore 3.5 kupinda yeKutambudzika zvichaita vaJudha vanotenda zvitizire gwenga Ishe achadzivirira pavo kwaAntikristu vake kutambudzwa. Noah akanga akachengetedzwa kuburikidza mafashamo uye achava pane chikamu vanhu vechiJudha kuti.
· Enoki mufananidzo ungano vakanga vasiri chikamu Mafashamo uye pakutonga kwaMwari kana chinozadzwa akabatwa uye kutorwa naMwari mafashamu asati asvika.
Enoch / Enoki mufananidzo Assembly
1 Genesis 5:24 - Zvino Enoki saizvozvi akafamba naMwari, akanga asiri, nokuti Mwari wakamutora.
H Änok ari akataura muenzaniso zvikuru Assembly kubvutwa maringe nenguva yokutambudzika Anti-Christian. Enoki akararama 7th danho kubva kuna Adhamu, uye akararama munguva inokosha chaizvo nguva, kureva munguva asati kwemafashame. Shoko rinoti panguva iyoyo saka kuipa murume mukuru panyika, uye vanhu vake mwoyo uye vavariro akanga zvachose zvakaipa nguva dzose.
Pakati ichi kwevanhu hubbub runotadza, paiva nomunhu, Enoki, vaitenda muna Mwari uye akafamba naye. (1MOS 5:24) Kupupura Enoki kuti akawana nyasha dzaMwari. (VaH 11: 5)
Enoki akatorwa akakwidzwa
VaHebheru 11: 5 - Nokutenda Enoki akatorwa kubva pasina kusangana rufu . Uye vakati vamuwana akasawanikwa nekuti Mwari wakange atora iye amene .
H Änok chakabatwa pasina anoravira rufu Mwari rwaakatora iye amene. Panguva kubvutwa ake pamberi sezvo akaparidza Hanoki, vanhu nguva yake, pamusoro kuuya nhamo uye kurangwa kwechivi uye godlessness. Kana chinangwa wechivi vakazobvumirana uyewo kutonga kwaMwari chivi akauya raNoa uye akatumira pemafashamo, asi zvino akanga Enoki kare wakakwidzwa Ishe.
Mafashamo ndiye achatuma panyika mufananidzo kwaMwari, uye vakaipa vanhu pakupedzisira nguva - hasha dzinouya (1 VaTesaronika 1:10)
Kuendeswa kune imwe nzvimbo
D and rechiGiriki rokuti "vamubata amene" riri metatithemi, uye ari KVJ rakashandurwa "transportet", kureva akatamisira, kuendeswa kune imwe nzvimbo. Enoki aiva nemamwe mashoko, zvifambiswe kana yakatamira kudenga kwete nokuti akaramba rufu. 1 Corinthians 15 anokuudza kuti haasi munhu wose ovata asi vose shandurwai. Zviri Paul uyo anotsanangura kubvutwa Township apo haasi munhu wose acharwisana rufu, asi ruzivo kuti anotora Ishe nesu kumba kwake.
Just saEnoki unomirira Assembly kubvutwa pamberi kutambudzika, kumirira Noa nemhuri yake, izvozvo akavimbisa vakasara vaIsraeri, izvo richachengetedzwa pakutambudzika, uye kuona Mesiya umambo zvikomborero.
The neropa wechinomwe kubva kuna Adhamu
D and zvingave zvichinakidza kutaura pano ndechokuti Enoki aiva neropa wechinomwe kubva kuna Adhamu. Assembly ndiyo chete nzira Assembly wechinomwe kuti anoratidzwa Zvakazarurwa Chapter rechitatu
Tiri kurarama munguva paRaodhikea nguva, izvo, yakavakirwa kare uye uprofita yekufamba nokuti Township ndiyewo ndima wekupedzisira Assembly kubvutwa pamberi. Tinewo kurarama pakutanga makore sjutusende pashure pakusika, apo Enoki akatorwa akakwidzwa sezvo rechinomwe släktsled pashure Adam.
R yekare kubva zita Enoki rinoreva kurovedza uye kudzidzisa, izvo zvinoita kuti tifunge raJesu murayiro kuungano. - " Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose" (Mateu 28:19 )
Maererano netsika nechiHebheru, sezvo ari Enoki akaberekerwa pazuva rePentekosti, riri zuva ungano akaberekwa. Hanoks upenyu uye kubvutwa pamberi mafashamu ndiwo muenzaniso yakajeka kubvutwa ungano.
Roti akaponeswa kupukunyuka kutsamwa kwaMwari
1 Eksodho 19:22 - "ndisaparadza guta iwe kutaura. Asi kurumidzai tizirako, nekuti handigoni kuita chinhu kusvikira muri ikoko "
G ud akanzwa kuchema kweSodhoma neGomora, uye akaona kwazvo chivi akatonga maguta. Abhurahama bargained naShe kuti haana kuparadza maguta makanga chaizvo kusvika gumi vakarurama mumaguta. Zvino kwakanga vasiri gumi vakarurama mumaguta asi bedzi nyore - Roti.
Pasinei kuti zvakanga zvisiri chinhu kuti Ishe akanga aita kuti, haana kuparadza uye mhosva maguta nokuda kwake mumwe wavo. Sodhoma neGomora pasi kutonga kwaMwari uye hasha, uye Mwari ngaave kunayisa moto nesarufa pamusoro maguta. Asi Ishe haana kugona kutanga hasha dzake kusvikira Roti akanga asiya guta uye vakanga vakachengeteka vari pedyo netaundi muZoari.
Ruka 17: 28-29 - Saizvozvowo zvakaita mumazuva aRoti; vaidya, vaimwa, vaitenga, vaitengesa, vaidzvara, asi nemusi Roti akabuda muSodhoma kwakanaya moto nesarufa zvichibva kudenga, zvikaparadza vose.
L Iskarioti akabviswa nguva uye nzvimbo apo kutonga kwaMwari kwaizova kurwadziwa. Vatumwa vakatumwa kununura Roti kuzivisa kuti vakanga vasingagoni kutanga kutonga kwaMwari Roti isati akachengeteka. Roti mufananidzo ungano uyo anonunurwa kubva nguva nenzvimbo kutsamwa kuuya.
2 Petro 2: 7-9 - Asi iye akaponesa Roti akarurama, uyo akanga anoshushikana vakaipa ndararama upenyu.
P etrus vanodzidzisa pamusoro mutongo inokanganisa zvakaipa zvose, uye chinotiratidza kuti Mwari haadi achatonga akarurama pamwe nevakaipa.
Daniel vatatu vaiva romoto
H istorien pamusoro Daniel uye varume vatatu romoto ndeimwe nyaya yekare kuti anoratidza zvakajeka pakutambudzika uye remangwana kupera.
Mambo Nebhukadhinezari, inova muenzaniso wakajeka kwaAntikristu, wakange adzika chifananidzo chendarama mubani reDhura muBhabhironi. Cherechedza kuti chifananidzo chinhu matanhatu pakureba uye makubhiti matanhatu paupamhi, izvo ingafananidzwa kwaAntikristu kutaura 666. Nebhukadhinezari kumanikidza munhu wose kuwira pasi uye kunamata ichi chepamusoro chifananidzo, apo chaitika vaya kuteerera zvaifanira ugokandwa romoto . Unopfuta kwazvo mufananidzo hasha dzaMwari uye kutambudzika kukuru mukutambudzika. (Maraki 4: 1. - Tarirai, zuva rinouya, izvozvo sechoto)
S adrak, Misheki, naAbhedhinego vakaramba kukotamira chifananidzo chaNebhukadhinezari, vakakandwa muvira romoto. Mambo akarayira kuti vira anofanira neshungu kanomwe chaizvo kudarika iwe ndamboona kuti, uye pane mufananidzo pakukwana kutaura. Jehovha akatuma ngirozi yake vakadzivirira Shadreki, Misheki naAbhedhinego mu romoto uye vakabuda pasina kukuvara kana kushanda moto.
Asi Anoteterera mubvunzo nyaya ino ndiko Daniel ari pane imwe nzvimbo. Ainge mumwe wevaya kufugamira ibvi kuna chifananidzo? Sei akanga asina kupinda, uye nei here kukandwa muvira romoto. Tinogona kuva kumbonyanya nechokwadi kuti Dhanieri haana kufugamira ibvi kuna chifananidzo Nebhukadhinezari. Daniel akanga chete kwete kupa apo munhu wose kuti achinamata, kana panguva unopfuta kwazvo kutambura. Mwari aiva "ndikamubvisazve."
Rondedzero kuti mambo akanga varume ava vari romoto wakange kuti paiva nevarume echiJudha (Dan 3:12). Varume vatatu vechiJudha mufananidzo kwevasanangurwa valsiraeri richachengetedzwa kuburikidza pakutambudzika, uye Daniel, anodiwa (Dhanieri 10:11) mufananidzo ungano ndivo vachanzi akachengetedzwa kubva pakutambudzika.
Pauro akadzidzisa pamusoro kubvutwa
P aulus aiva munhu wokutanga panyika akapa dzidziso uye nokuzarurwa pakubvutwa, makore anenge 20 pashure muchinjikwa. Kusvikira panguva iyoyo zvakanga zvisingazivikanwi nokuti Jesu haana kudzidzisa kubvutwa kuvadzidzi vake panguva yake. Kubvutwa wekereke iri kunyanya anorondedzerwa muna 1 VaTesaronika 4:16 uye 1 VaKorinde 15:52.
Rimwe pachena ndima GT kuti tinogona kunzwisisa muungano inobva Isaya 26: 19-21. Ndinoda kuedza kuenzanisa zvatinoita kuona muna Isaya chitsauko 26, uye kudzidzisa naPauro pamusoro kubvutwa muna 1 VaTesaronika 4: 16-17 & 5: 9.
Mashoko aIsaya dema rwezuva uye Pauro tsvuku.
J on 26:19 - Asi wako vakafa vachararama; miviri yavo ichamuka. (First vakafa muna Kristu vachatanga kumuka) muka nokuimba, imwi kurarama muguruva, nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza; nyika achapa kubva kuvakafa. Uyai vanhu vangu uye kupinda kwako makamuri, akapfiga mikova shure kwenyu. (Zvino isu vapenyu vakasara, tichabvutwa mumakore pamwe navo kuti tichingamidze Ishe mumhepo) Vandai kwenguva duku, kusvikira kutsamwa kwapfuura. Nokuti tarisai Ishe unobuda panzvimbo yake kurova vagere panyika nokuda kwezvivi zvavo. (Nokuti Mwari haana tigadzirirei vokutsamwirwa asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu)
Chinhu pedyo kureva Johani 14: 2-3 apo Jesu anotaura pamusoro mumba kwaBaba zhinji dzokugara, uye kuti akanga achienda kure kundokugadzirirai nzvimbo kwatiri. The Gungano vachanzwa chete inzwi John akanzwa Revelation: - "Kwira kuno," Tichatora chikamu nzvimbo Ishe akagadzirira isu. Tichava kupinda mukamuri yake, uye akapfiga mukova shure kwedu. Kana zvakaitika, Jehovha panzvimbo yake kurova vagere panyika nokuda kwezvivi zvavo - anova kutsamwa kwaMwari.
Chipikirwa ichi hachisi pamusoro wake kudzoka kuonekwa apo Ishe anouya Israeri ave kwadziri. Zviri chivimbiso kukereke kuti akaenda kumusha kuna Baba vake kuti vagadzirire nzvimbo isu ikoko.
In Pakutanga mubhuku raZvakazarurwa, chitsauko 4, tinosangana boka kuti hatina kusangana kare muBhaibheri. Zvave kare kwave nevamwe vaprofita matatu kupfuura Johani vakatakura chiratidzo yave kuona choushe chaMwari, asi hapana kare vakafanotaura vazhinji ichi. Isaya akaona navo Isaya Chapter 6. Ezekiel havana kuzviona Ezekieri Zvitsauko 1 & 10, uye Dhanieri akaona navo kwete Chapter 7. Vakuru 24 Ndinofunga kuti agere chigaro choumambo chaMwari muna Zvakazarurwa 4: 4th
vazhinji ava asina saizvozvo pamberi, asi ikozvino, pashure kukereke nomwe kuti vanomiririra ungano kubva munhau uye ouprofita maonero, tinoona navo kudenga. Vari panzvimbo vakapoteredza chigaro chaMwari pamberi Mukutambudzika achava kutanga kwavo muna Zvakazarurwa chitsauko 6, uye saka, ndinotenda kuti vakuru 24 vanomirira kubvutwa chechi iri panzvimbo ekutambudzika asati awana kutanga kwayo.
Vakuru 24 vagere pazvigaro zvoumambo sezvo ivo vanotonga. Vanogara chigaro choumambo chaMwari, saka ivo kubatsira uye vanobatsira Ishe. Vakagara pasi saka basa ravo riri kuitwa. Ivo vakapfeka chena sezvo vari rättfärdigjorda. nguo dzavo vari Himation, inova kufanana wadhi uye nguo yaJesu. Vanopfeka korona (Stephanos) saka ndiwo madzimambo. Vanewo akadana vakuru vari vakagadzirira tsigiro kuungano.
Kana sjungar vakati sezvo rwiyo förlöstas muna Zvakazarurwa 5: 9-10:
" Ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa nokuzarura zvisimbiso zvaro, nokuti iwe vakauraiwa, uye neropa renyu imi akatenga vanhu Mwari (isu) kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu norudzi. Makaita navo (isu) kuti youmambo mukati (madzimambo) nevapristi kuna Mwari wedu, uye ivo (we) achatonga panyika.
S kana nguva zhinji kudaro, rugwaro rwacho harusi rakashandurwa zvakarurama kubva epakutanga. King James ane, pakati pezvimwe shanduro akagara chokutanga munhu muzvizhinji pachinzvimbo. Vakuru 24 vazivikanwe pamwe vakaregererwa Church, iyo nguo saivo, vari vaprista uye madzimambo saivo, uye vari panzvimbo pamberi kutambudzika kutanga.
V muna saka ona muBhaibheri mienzaniso yakawanda uye mienzaniso inoratidza kuti Jehovha kuchaita ungano yake kubva panguva imwe uye nzvimbo panyaya yokupedzisira mutongo kuti kuchaita nyika.
Achaita kuti miti uye mutivige mumba raBaba pedo kutsamwa kwake kwapfuura. Tinovimbisa achengetedzwe kubvira icho achapfuura ino nyika sezvo chinangwa uye nyaya kutambudzika haisi ungano. Hatisi vakamirira kwaAntikristu asi tariro yakaropafadzwa naMwari wedu mukuru noMuponesi, Jesu Kristu kuzviratidze pakubwinya. (Tito 3: 4) Iye Anotiponesa kubva pakutsamwa kuchauya. (1 Th 1:10)
D and Ndiro pambiru yechitatu ndinonyora sezvo kuzvidavirira nokuda Pre-trib dzidziso, kureva kuti Jesu achaita kundotora ungano yake asati kupinda 70 uye yokupedzisira vhiki dzemakore, uye kuti kutambudzika kutonga unodzima pamusoro pasi.
A rudzi rwakasarudzwa
U rinobatanidza kuratidza yokudzoka kwaJesu hwagara anonakidzwa ini, uye pfungwa rudzi rwakasarudzwa munhoroondo yevanhu havazoraviri rufu, asi pachinzvimbo achafanira kuona kuti kushandurwa chinoitika apo Jesu anouya kuunganidza ungano yake kuburikidza yokudzura vari vapenyu kudenga.
Day rokudzikinura Nzira
D and inoita wenyaya saka dzinonakidza uye nharo, ndiko kuti zviratidzo kutaura zvakasimba kuti tiri kuenda akananga kupera ramangwana ichi, uye nokudaro kudzoka kwaJesu.
Vanhu vakawanda nhasi vari kutyiswa nezviratidzo tinogona vose kuona uye ruzivo, uye kuti Mweya Mutsvene anotaura zvakajeka kuti kereke yaMwari uye mwoyo yevanhu kuti vagadzirire. Panyaya iyoyo, ipapo vanhu vanotanga kuona kuti pazuva rokudzikinurwa riri pedyo, mubvunzo unotevera kana tinogona kutarisira uppryckelsens nguva kunoitika?
Mibvunzo vakawanda vanobvunza
E N Vamwe mibvunzo kuti vanhu vakawanda kuzvibvunza panyaya kudzoka kwaJesu apo tinogona kutarisira kubvutwa kunoitika? The Assembly vachatapwa pakutambudzika? Chii chaizvo chiri chinangwa mukutambudzika, uye zvamazvirokwazvo kwaAntikristu kana Jesu, tinofanira kumirira? Ko kudzoka kwaJesu uye kubvutwa chete kana zviitiko zviviri zvakasiyana?
Ndinovimba kuti zvose pambiru ichi uye wokupedzisira zvandanyora mhinduro mimwe mibvunzo.
My pachako Chivimbo
T reviously ndiri tsvarakadenga nechokwadi chokuti Jesu achatanga dzosa yeko ake pashure kutambudzika uye kubvutwa uye kudzoka chinooneka kwaJesu chiitiko chete. Jesu anotaura chete ane kudzoka, uye nei ungano kuponeswa kubva pakutambudzika apo vose vaIsraeri uye ino kutambura? Ndakaona kutambudzika somunhu inodiwa kuchenesa kwacho kwemuviri waKristu nokuda tsvina tinoona munzvimbo dzakawanda nhasi.
Asi kana ini pakutanga akanga mibvunzo isina kupindurwa kuti ndaisagona kuwana vakavhiringidzika nezvinoitwa ndaigona kuverenga Bhaibheri, ndakaedza kuzvipinza muna mibvunzo zvakanaka. submissions ava pamusana zvandakanga vakwira naye.
Sekungovapo ndiri nhasi kuti ruponeso rwangu, ndiri kana totaura nguva pfungwa yokuti kubvutwa ungano. Jesu anobvisa ungano yake yokupedzisira vhiki dzemakore uye kwevhiki 70 isati yatanga, uye ndinoda kugoverana zvimwe zvikonzero kuti ndinofunga rinorumbidza nayo.
Kutorwa naJesu 'rinooneka kudzoka
John 14: 1-3 - Musarega mwoyo yenyu ichinetseka. Tendai Mwari uye kutenda mandiri. Mumusha maBaba vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai zvisina kudaro, ndingadai ndakuudzai kuti ndinoenda kundokugadzirirai nzvimbo? Uye kana ndikaenda kundokugadzirirai nzvimbo, ndichadzoka ndozokutorai kuti muve neni, kuti nemiwo mugova kwandinenge ndiri
1 VaTesaronika 4: 15-17 - isu kwamuri neshoko raIshe, kuti isu vapenyu, tinosara kusvikira pakuuya kwaShe, zvirokwazvo hatizotangiri avo vakavata. Nokuti kana murayiro guru, inzwi rengirozi huru uye nehwamanda yaMwari, Ishe amene uchaburuka kubva kudenga. Uye chete vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara, tichabvutwa mumakore pamwe navo kuti tichingamidze Ishe mumhepo. Uye saizvozvo isu nokusingaperi naIshe
U ppryckelsen harisi rimwe zita nekuda kudzoka kwaJesu zvinooneka. Ungati kuti kudzoka kwaJesu rinowanikwa mumatanho kutanga pakubvutwa uye kuguma panguva Yake vanooneka pakudzoka pashure kutambudzika kukuru.
U ppryckelsen chiitiko risingaoneki kunoitika pasina nyevero. Tinoziva, mune mamwe mashoko kunyatsoti twasu pazvinoitika, uye tinoudzwa kurinda uye tichinyengetera. Tichakurukura kuziva nguva pamusoro pakubvutwa uye vane kunzwisisa kana anotanga kubata, asi nguva uye nguva hatizivi chinhu pamusoro, uye zvichava zvikasazikamwa kusvikira pazuva zvinoitika.
Jesu anouya pakati Pasi kusangana nesu muchadenga, uye ipapo itidzosere kudenga, tive kwaanobva. Dai Jesu akapfuurira Earth pashure pakubvutwa, saka akanga atora nesu apo tiri pachinzvimbo. Asi maererano John, uye anouya shure kwatiri kuenda kwaanobva, vari imba yaBaba vake kupinda ushe hwake hwokudenga.
Jesu kudzoka zvinooneka
J esu zvinoonekwa kudzoka hapana asingaoneki kana chakavanzika kuuya. Meso ose achamuona, uye iye achava zvizere kuonekwa ari pamakore okudenga. Nguva zuva hazvishamisi zvakare, zvino, tinoziva achaita pakarepo mushure kuguma kutambudzika, kana makore 3.5 chete pashure guru dambudziko mangwanani.
Vanhu vashoma vachapona pakutambudzika achakwanisa yokupupurira chiitiko ichi.
Maererano Ishe pachake Mashoko
P aulus rinosimbisa kuti "neshoko raJehovha " kana anodzidzisa pamusoro kubvutwa uye rumuko.
Chokutanga, hazvina 1 VaTesaronika rakanyorwa naPauro pamusoro AD 51, uye zvimwe akanga asiri Evhangeri asi rakanyorwa panguva pfungwa apo Pauro akanyora tsamba iyi. Chechipiri, uchaona chero dzidziso dzaJesu muEvhangeri apo Jesu anotaura nevamwe kuti muka kubva kuvakafa, vamwe kunobva mupenyu akatendeuka kutarisana naye mumakore.
Jesu akaparidzira chete kumuka kubva kuvakafa, yakavakirwa zvipikirwa tingaona mutestamende yekare. Ikoko, chakavanzika yakapikirwa rumuko Pakarepo shure kwekutambudzika kukuru (Dhanieri 12: 2), uye wakarurama pamberi Millennium. Ndicho ichi rumuko Jesu upenyu kana kumuka izvo saka ndohwaJehovha Saints GT.
1 VaKorinde 15: 51-52 - Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika: Hatizorari tose, asi tose tichachinjwa, kamwe kamwe, muna nekubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, uye vakafa vachamutswa mukusaora, uye isu tichachinjwa.
D and zvinoreva kuti Pauro rinopa mumwe zvakavanzika kuti zvisina kunanga ungano kuita, sezvaaiva kuburikidza zvakananga mashoko kana kuratidzwa kwaIshe.
The chakavanzika Pauro anoudza ichi uye kuti haasati aratidzwe kana kuzivikanwa, rinongova kuti rudzi rwakasarudzwa haangafi, asi vachaona zvichava yachinjwa kuva uye chimiro, uye vachabatwa pamwe vakafa kuti kusangana Jesu kudenga.
Tinoda kuva kwaanobva
John 14: 1-3 - "Regai mwoyo yenyu ichinetseka Tenda Mwari uye kutenda mandiri Mumusha maBaba vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara Dai zvisina kudaro, ndingadai ndakuudzai kuti ndinoenda kundokugadzirirai nzvimbo... nokuti iwe? uye kana ndikaenda kundokugadzirirai nzvimbo, ndichadzoka ndozokutorai kuti muve neni, kuti nemiwo mugova kwandinenge ndiri. uye kwose kwandinoenda, imwi munoziva kuti. nzira munoziva. "
In eEvhangeri yaJohani, Jesu anotipa chizaruro yakasiyana. Ari kutaura pamusoro chinhu kuti hapana muprofita ndamboramba kana vave vachivimbisa. Hapana tinogona kuverenga kuti Mesiya aizouya, asi kuunganidza Vatendi munzvimbo imwe muJerusarema yepasi, vaizoaendesa kumba kwaBaba vake, ndiro imwe nzvimbo kuti vaende.
Kana anopa chipikirwa, zviri maererano kuti " Ndichadzokazve uye tora iwe neni, kuti nemiwo mugova kwandinenge ndiri." Ari kutaura pamusoro kwakatangazve, kwete rusununguko Jewish kuita, kana kuti ushe hwake panyika, kana kutonga marudzi. It ishoko chete kugadzira yake.
John 14: 1-3 uye 1 Th 4: 13-18
D pano vari zvinoshamisa zvakafanana kana tikaenzanisa idzi mbiri apo mamwe mashoko kana kuti zvirevo zviri zvakafanana. Vanotevera mumwe panguva imwe, ari kuti vakauya, uye nenzira chigamba inovakwa.
v.1 v.13 hanya Pine
Tenda v.1 v.14 Ita
v.1 Mwari, ini v.14 Jesu, Mwari
ndima2 akuudza v.15 kukuudzai
v.3 dzokai v.15 pakuuya kwaIshe
v.3 funga V.17 yako akatorwa akakwidzwa
v.3 ini V.17 kundosangana naShe
v.3 kuva apo ndiri V.17 hadzifi naShe.
Maviri aya anonyaradza uye chinotiratidza zvakasiyana nzira kuti Ishe auya kuzotora vatendi kubva pasi kukudzwa kudenga.
1. Hapana chero ndima muTestamende Yekare kana kuti Testamende Itsva kureva kuti kereke vachaenda pakutambudzika nguva, kana kuti kereke inofanira kumira chiso nechiso pamusoro kwaAntikristu.
2. Dambudziko anonzi "dambudziko raJakobho" (Jer30: 7), asi Haritumidzwi "ungano kana chechi kutambudzika".
3. Angel Gabriel akazivisa Dhanieri kuti vhiki 70 dzakanga dzakatemerwa vanhu vako (vaJudha) uye neguta rako dzvene (Jerusalem). Kereke haina kutaurwa pano. Dan 9:24
4. Gungano haana mugove vhiki 69 okutanga, uye hazvizovi chikamu rokupedzisira uye kwevhiki 70.
5. Muna Zvakazarurwa kubvutwa kunoitika muna Chapter 4: 1 iyo vari kutambudzika nguva kunorondedzerwa Chapter 6-19. Vakuru 24 anomiririra ungano iri panzvimbo pamberi chisimbiso chokutanga yaputswa.
6. The Assembly rinotaurwa nguva makumi maviri muzvitsauko zvitatu Zvakazarurwa wokutanga, asi ari kumbobvira kutaurwa pakati zvitsauko 4 uye 19.
7. kukuru nguva anonziwo "zuva rokutsamwa" (Zef 1:15) muBhaibheri, asi Jesu haana tigadzirirei vokutsamwirwa. (1 Th 5: 9), asi isu kubva "hasha" (1 Th 1:10)
8. Kutambudzika nguva inonzi Zuva raIshe muBhaibheri (Zef 1:15). Asi 1 VaTesaronika 5: 2-3 inoti zuva raShe (kutambudzika) richauya sembavha usiku. vanhu (vasingatendi) Kana vachiti, "Rugare norunyararo," ipapo yarova (vasingatendi) nokuparadzwa sezvo pakarepo sezvo marwadzo anouya mhiri mukadzi pamuviri, uye ivo (vasingatendi) haangapukunyuki. Zviri pachena kuti kutambudzika chinhu kuchawira disbelievers, asi haibatanidzi akatendeka uye kuponeswa.
9. Tichafara kunyaradza mumwe nehurukuro pakubvutwa (1 VaTesaronika 4:18). Hapana nyaradzo pakudzidzisa kuti anoti kereke vachaenda kuburikidza chikamu kana zvose kwokutambudzika domstid.
10. Jesu akavimbisa kereke pana Philadelphia kuti aida kuchengetedza kereke, uye "kukununurai kubva paawa mumuedzo, zvichazoitika pamusoro nyika yose uye kubudisa vanhu vayo kuti bvunzo." (Zvak 3:10) Mwari akapikira kuti achengetedze ungano vakatendeka kubva kutambudzika kumwedzi.
11. Sezvo Enoki akatorwa akakwidzwa kudenga pamberi mafashamo uye Noa akanga akachengetedzwa kuburikidza Mafashamo, kuti Assembly achapiwa kubvutwa pamberi kutambudzika uye Israeri residual kuchengetedzwa pakutambudzika.
12. Saizvozvowo kuti Mwari aigona kutonga Sodhoma neGomora Roti isati kure neguta, Mwari haagoni kutonga nyika ino isati vakarurama aenda. (1 Gen. 19:16)
13. Jesu akataura pakutambudzika nguva apo akabvunza: ". Vaka nguva dzose uye kunyengeterera simba kupukunyuka zvinhu zvose zvichauya uye kuti mugogona kumira pamberi poMwanakomana womunhu" (Ruka 21:36) Hazvina musoro kuti Jesu anokumbira chinhu haasi kuda kuchengeta.
14. Maraki 3:18 inoti Ishe (ari Patakasvika) achatiratidza kusiyana kowakarurama nowakaipa, kwouya anoshumira Mwari uye asina kumushumira. Pre-trib vanodavira kuti Jehovha anouya kuunganidza ungano yake, ipapo isu vauya naye kutonga pakati vakarurama nevasakarurama.
15. Panguva pakubvutwa, Jesu anouya kuti chechi yake (1 VaTesaronika 4: 16-17) paanouya pakupera kutambudzika, unouya pamwe neungano yake. (1 Th 3:13).
16. Munguva tsamba kukereke nomwe kuti akakoka Jesu kuti "kunzwa zvinoreva Mweya kuungano." Asi kutambudzika kukuru, pashure kuti Mweya Mutsvene muchechi iri kurutivi akagara, anoti: "Uyo ane nzeve, ngaanzwe" (Zvakazarurwa 13: 9) Iye rinosiya kuti Assembly, apo pasina chechi kuteerera Mweya anotaura uye kuenda pakutambudzika.
17. Munhu Anopesana naKristu ndichakuita hondo nevatsvene, uye vane simba rokukunda navo. (Zvak 13: 7). Asi harigoni kuva Township kutaurwa pano. Jesu pachake akavimbisa kuti "helvets zvengarava haafaniri ungano simba." (Mateu 16:18)
18. Jesu haana kutaura: "Kana ichi chakaitika," ipapo ruramisa mugosimudza misoro yenyu, asi "Kana izvi zvose (zviratidzo) anotanga kuitika," saka ruramisa mugosimudza misoro yenyu, nokuti ruregerero rwenyu. (Ruka 21:28).
S chikomo I sarudza magwaro maviri, GT uye NT, vachitaurirana, uye tinopupura kuti kereke handingakwiri kuburikidza hasha dzaMwari, kana kutambudzika, ndinoda kutaura anotevera maviri:
1 VaTesaronika 1: 9-10 - The vanotaura pamusoro sei isu vakagamuchirwa iwe uye kuti makadzokera sei kuna Mwari muchibva kuzvifananidzo kuti mushumire Mwari mupenyu uye wechokwadi uye kuti mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo Mwari kubva kuvakafa, Jesu uyo ​​akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya
Isaya 26: 19-21 - Asi wako vakafa vachararama; miviri yavo ichamuka. Muka uye vachiimba, imwi kurarama muguruva, nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza; nyika achapa kubva kuvakafa. Uyai vanhu vangu uye kupinda kwako makamuri, akapfiga mikova shure kwenyu. Vandai kwenguva duku kusvikira kutsamwa kwapfuura. Nokuti tarira, Jehovha unobuda panzvimbo yake kurova vagere panyika nokuda kwezvivi zvavo. Nyika achafukura pachena ropa ravo zvikwereti uye haachazozvivanzizve vakaurawa navo.
V muna haagoni kuona kuti chikamu ichi kubva Isaya nokusingaperi pamberi hwakazadziswa. Zvinoita wo haana kubvumirana kumuka kuti Jesu akaparidza uye Dhanieri anoudza Dan 12: 2, zvatinoziva chichaitika pashure Mukutambudzika kwete pamberi.
Pano Isaya anotaura pachinzvimbo kumuka kuti kunoitika apo Ishe kunzi vanhu vavo mumakamuri vasati uye napamberi hasha dzaMwari uye mutongo anobuda pamusoro penyika.
Uyai vanhu vangu
"K pamusoro vanhu vangu," izvo chaizvoizvo rinoreva "Kutsakatika" kana "kuva asingaoneki", chinhu zvakafanana zvinoshamisa kuti zvakaitika John akanga Zvakazarurwa chitsauko 4, apo akaona mukova wakazaruka kudenga, uye panguva imwecheteyo wakanzwa inzwi raMwari hwamanda saizvozvo ati: "Kwira pano." Pakarepo mushure Mwari, kutonhora inova John wakakwidzwa cheushe chaMwari, kwaanobva kudenga tarira kutambudzika vakaridza panze panyika.
John unomirira kereke iyi kuti richawana chete pazuva uppryckelsens. Kuburikidza murayiro, inzwi rengirozi huru uye nehwamanda yaMwari, ungano achabatwa akakwidzwa kudenga uye vachaona nokutambudzika petenura pasi.
Kuedza uye arange vagere panyika
Zvakazarurwa 3:10 - Nokuti iwe vakachengeta shoko rangu nezvokutsungirira, ndicharamba iwe achikuponesai kubva paawa mumuedzo, zvichazoitika pamusoro nyika yose uye kubudisa vanhu vayo kuti bvunzo
J esaja inotaura "Ishe unobuda panzvimbo yake kurova vagere panyika nokuda kwezvivi zvavo." Saizvozvowo anosimbisa Zvakazarurwa 3:10 kuti awa muedzo (kutambudzika), iyo ichauya pamusoro yose iri kuisa vanhu vayo kuti bvunzo.
Isaya Revelation hurukuro pamusoro chinangwa ekutambudzika ndiko kuranga uye edza uye vanogara panyika nokuda kwezvivi zvavo kuburikidza chinhu rinonzi hasha dzaMwari. The chete hasha kuti ndima idzi zvinopupurira kuti takaponeswa kubva, naJehovha anodana isu kumba Baba vake, kumusha mumakamuri ake kusvikira kutsamwa kwapfuura.
Murume ari pachitsuwa mugwenga
O M taigona kuita kumwe kuedza uye akaisa munhu pakachitsuwa mugwenga, pamwe Bhaibheri chete muruoko rwake, asi nezvavaitsanangura uye kutevedzerwa nepfungwa dzidziso. mhedziso chii akanga asvika pakuguma noruremekedzo kuti nguva pfungwa yokuti kubvutwa?
Chokutanga, akanga adzidza kubva Isaya 13: 9-13, uye Amosi 5:18 kuti Mwari aizoita mutongere pasi nokuda kwezvivi zvavo kuburikidza nokudeura hasha dzake kuburikidza zvinotyisa domstid sezvo neBhaibheri Zuva raShe.
Isaya 13: 9-13 - Tarirai, zuva raJehovha rinouya, rinotyisa, rine hasha nokutsamwa kukuru, kuti ashandure nyika uye nokuparadza vatadzi vanogara ikoko. Nekuti nyeredzi dzokudenga uye zvinyamutanhatu regai anotakura zvakawanda chiedza chawo. Zuva parinobuda rima, uye chiedza mwedzi harisi pasi. Ndicharanga nyika nokuda zvakaipa kwayo, navakaipa nokuda kwezvakaipa zvavo. Ndichaita stoltas Kunyepera kuva ndichigogodza pasi vadzvinyiriri kuzvikudza. Ndichavaita munhu vashoma kupfuura ndarama yakaisvonaka, munhu vashoma kupfuura ndarama tsvene yeOfiri. Saka ndichadederesa denga, nyika kuti arege nokudzungudza nheyo dzayo nokukoshesana Jehovha wehondo chigumbu, wokupisa hasha dzake.
Amos 5:18 - Vane nhamo vaya vanoda kwazvo zuva raJehovha! Sei iwe kuvamo? Day waJehovha rima, kwete chiedza.
G eNom kuti zvino verenga mberi Mateu chitsauko 24, aikwanisa kuona kuti mutongo nguva yaizova zvokuti kana Ishe akapedzisa zvaizova hapana vararame. Asi, Jehovha achapedzisa domstid ichi nesimba uye shure panyika ino nokubwinya. Kana aiziva kuti kudzoka kwaJesu akanga asi asina zvaitika, saka aiziva kuti hasha dzaMwari achiri kumwe mune ramangwana.
Paakasvika 1 VaT 9-10 saka aigona kuona rakanaka akajeka. Akaverenga nezvaJesu uyo ​​Anotiponesa uye akatinunura kubva pakutsamwa kuchauya.
1 VaTesaronika 1: 9-10 - The vanotaura pamusoro sei isu vakagamuchirwa iwe uye kuti makadzokera sei kuna Mwari muchibva kuzvifananidzo kuti mushumire Mwari mupenyu uye wechokwadi uye kuti mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo Mwari kubva kuvakafa, Jesu uyo ​​Akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya.
shanduro Chirungu (NIV): ..and kuti mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo waakamutsa kubva kuvakafa - Jesu, anotinunura kubva pakutsamwa kuuya.
G eNom kuverenga ndima yeBhaibheri aigona kupindura mibvunzo inotevera "uyo, chii, kupi, rini, uye nei." Ndiani (Jesu) Chii (Munorwira uye Anotiponesa), kana (nguva kutsamwa). By kuverenga mberi muna 1 VaTesaronika 4: 15-17, aigona kuverenga kuti "munhu wose" ari kubva pasi kusvikira okudenga, uye muna 1 VaTesaronika 5: 9 paakabvunzwa sei vaitewo patinoverenga kuti tiri anofanira kutambura hasha dzaMwari, asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naJesu Kristu.
1 VaTesaronika 5: 9 - Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti tive vokutsamwirwa asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu
shanduro Chirungu (KJV): Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti kutsamwa, asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu
V Ur Somuenzaniso vanogona kuona kuti, kuti isu tinoponeswa pamusoro iyoyo-pfungwa hasha dzaMwari sezvo tisina vamwe kuti, anogona saka kugumisa kuti pakubvutwa zvichaita pachinzvimbo kumiririra nayo. Kutorwa achaita alltstå rinokonzera hasha dzaMwari panyika avo rakatanga kwavo muna Zvakazarurwa chitsauko 6.
Mhinduro inonyanya kubvunzwa post-trib
M dzera nguva kazhinji nharo uye mibvunzo kubva kuvanhu vasingatendi muna kubvutwa pamberi kutambudzika. Heano mamwe acho:
"The Bible haridzidzisi kuti pachava advents maviri. Ungaita sei kuti Jesu achauya kaviri? "
Pindura: Just sezvazvaiva saizvozvo, pane zviviri zvakasiyana mifananidzo kwaMesiya muTestamende Yekare (kutambura muranda uye Mambo), pane zviviri zvakasiyana mifananidzo kudzoka kwaJesu anonetsa pamwe. sequences maviri Ava kubvutwa uye kudzoka kwaJesu zvinooneka. Unogona kutaura kuti Jesu 'kudzoka zvinoitwa mumatanho apo kubvutwa yatanga, uye Jesu' kudzoka anooneka zvatopera. Inongova nzvimbo dzakasiyana zvachose kana zviitiko.
"Jesu akati kuti pakubvutwa aizotora nzvimbo Pakarepo shure kwekutambudzika (Mateu 24: 29-31). Apo anotumira ngirozi vakasarudzwa vake"
Mhinduro: The Kutorwa hariwaniki Mateu chitsauko 24 nezvikonzero zvinoverengeka:
At pakubvutwa vanofanira vatendi kubwinya mitumbi kunotiita sezvo Jesu ari kukwira kudenga tichimhanya aigona kuzviita pasina kubatsirwa nengirozi. Sei tinofanira kubatsirwa nengirozi panguva pakubvutwa, kana takadzoka kubwinya mitumbi?
Ngirozi Anounganidza orättfärdia panguva ino nguva (Mateu 13: 38-43, 49-50)
Kana munhu anoti ngirozi iri kuunganidza vatendi Mateo 24 iri upprycklsen anofanira Matt 13 saizvozvowo ikoko. Muna Mateo 13, tinoona panguva iyoyo kuti vakaipa achavhuniwa kubva Earth pakutanga uye kwete vakarurama.
Ngirozi dziri yakatumwa kuunganidza vose vakarurama navasakarurama ichizotongwa Jesu pamberi 1000 gore umambo. Vanhu ava vari yavo dzinongoitika miviri, apo vakaipa mugomba remoto, apo vakarurama vanobvumirwa to nhaka 1000 gore umambo.
Kudzoka kwaJesu muna Mateu 24
Matthew 24:31 - With nokurira kwehwamanda kukuru, iye achatuma achatuma vatumwa vake, vagounganidza vasanangurwa vake kubva mana mufundisi pfungwa, kubva kuno rumwe rutivi rwedenga kusvikira kuno rumwe.
M kusvika 24 ari chitsauko anotsanangura kwaJesu zvinoonekwa kuvaIsraeri uye nenyika. Kutonga vavengi vake, uye kuti asimbise umambo hwaMesiya. Kazhinji kutaura vakasarudzwa Mundima 31, izvo sezvarinotaura ndiyo ungano. Ndinofunga zviri zvakajeka kuti vasanangurwa vaJudha chikamu chiri pamusoro.
Edza kunyange kuunza zvinotevera ndima maringe Mateu 24:31:
Isaiah 11:11 - Jehovha achava nenguva kamwe zvakare ruoko, kuti vawane vega vakasara vavanhu vake , chii vakanunurwa Asiria, Egypt, naPatirosi, Ethiopia, Eramu, weShinari, napaHamati, uye zviwi .
Isaya 11: 12 Iye achashevedzera mureza marudzi nokuunganidza vakadzingwa vaIsraeri uye VaJudha vakaparadzirwa kumativi mana enyika.
Banner uye hwamanda
B Anner uye hwamanda unomiriri Kusarudzwa navanhu. Hapana mubvunzo chete muropa vari kutaura, uye Mwari anozivisa kuburikidza naIsaya kuti varume nevakadzi vane akashevedza vaIsraeri. Vasanangurwa ndivo vaJudha vakatendeka vakapona Kutambudzika, uye kuti panguva iyoyo, vakapararira pasi pose. VaJudha vose kuenda kumba, riri maererano Uzere GTs ouprofita. Ndicho chiratidzo kuti hazvina kutaura chechi mundima.
"Pre-trib kutaurwa nevamwe vaitya kuenda kuburikidza kutambudzwa"
Pindura: Patinoudza nekutambura tinofanira kutanga kusiyanisa mukuru kutambura tinosangana munyika (gr.thlipsis) uye kutambura tinosangana pakutambudzika kukuru (gr.Thlipsis Megas) Jesu anotaura muna Mateo 24, uye Daniel Chapter rechi12
dzidziso Pre-trib haridzimi vatendi achapukunyuka kutambudzwa. Jesu akaprofita kuti isu vachakuvengai munyika ino nokuda kwake (Johani 15:18). Munyika vatendi vechokwadi vachaona hondo yezvokunamata namasimba, nyama yavo, uye nokuda kwevhangeri. Kuti mhando kutambura, Jesu haana Akativimbisa kuti tichasunungurwa kubva. The hasha tinosangana pakutambudzika chinhu chakasiyana uye chinhu kuti shoko akativimbisa kuti hatifaniri kuona kana ichipfuurapo. (1 Th 5: 8)
"Pauro anoti 2 VaTesaronika 2: 1-9 kuti kubvutwa haina kuitika kwaAntikristu asati rinowanika"
Pindura: Pauro anotaura kubvutwa pachinhu pazuva raIshe, kuti haisi enstydig kudzoka kwaJesu zvinooneka. Day waIshe haisi zuva chimwe betydningen maawa 24, asi kutoti nguva yokutonga rinobuda munyika. (Is 2:12, 13: 6, Ezekieri 13: 5, Joel 1:15 Amosi 5: 18,20)
Kereke muTesaronika vaitya uye mwoyo kuti kare akawanikwa pachavo mukati kutambudzika nguva. Paul anzwe uye anoudza kwaAntikristu anofanira kutanga kuratidzwa zvisati zvaitika. Kana kwaAntikristu anotanga sungano yake neIsraeri rinotanga svondo rapera makore, kana kutambudzika.
Sei vanhu vaponeswe pakutambudzika Mutsvene chabva panyika?
Mhinduro: Kuti Mweya Mutsvene uri kurutivi akagara hazvirevi kuti mukana wokuponeswa zvisisipo, asi kuti Mweya Mutsvene achagara mumwoyo yevanhu uko tine Mweya Mutsvene sechisimbiso rakanyatsojeka akasiyana kuti zera remakereke.
Pamberi pakudururwa Mutsvene paPendekosti akanga vanhu akaponesawo, uye yakaonekwa Mutsvene kuvanhu. Kana Mweya Mutsvene wakadururwa paPendekosti, hatina munhu "yechipiri" Mutsvene panyika. Kungofanana muTestamente Yakare, vanhu achaponeswa mukutambudzika iyo Mutsvene kushanda zvakafanana sezvo ari yekare, mujinga kubva kumusoro.
Mibvunzo kuna Post-trib dzidziso
S amtidigt pane mibvunzo yakawanda isina kupindurwa kuti dzidziso Post-trib zvakaoma kupindura kana kupa tsananguro zvakakodzera:
Kana pakubvutwa pokutanga aJesu vanooneka asvika, iye achabva vazadze Millennium?
"Kana uchifunga kuti chete kuponeswa vanogamuchira chikamu Millennium, uye kubvutwa pokutanga Jesu 'vanooneka kuuya apo anofanira pfungwa vanhu vose vari Millennium kuti makatsauka miviri nokusingaperi. Asi ndiani zvino vazadze Millennium, kana kubereka anogona chete kuitwa nevanhu dzinongoitika miviri "?
Mhinduro: Zvaitika nevanhu vakaponeswa mushure kubvutwa munguva yokutambudzika. Varume kupinda Millennium ravo dzinongoitika miviri.
Nei kubvutwa haataurwi Zvakazarurwa 19: 11-23 kana Thing Chapter 14?
"Muna Zvakazarurwa chitsauko 19, tinowana tsanangudzo kudzoka kwaJesu chinooneka, asi rinotaura kana kumutswa kana kubvutwa. Zek 14: 1-7 rinorondedzerawo chiitiko ichi, asi kwete apo rinotaurwa. Hachisi chinoshamisa kuti mumwe chiitiko munhau mukurusa kuti kunosanganisira kumuka mazana emamiriyoni evanhu havana kutaurwa kunyange muna Zvakazarurwa chitsauko 19 kana Thing Chapter 14? Sei? "
Mhinduro: The Kutorwa kana rumuko haadudzwi nekuti zvinongokonzerwa haina kuitwa panguva yacho.
Ndivanaani vachange kutanga inounganidzwa, vasakarurama (Mateu 13: 30,41,49) kana vakarurama? (1 VaT 4: 16-17)
Vose 1 VaTesaronika uye Matthew 13 anoti dzazvinogara kumutswa kutora nzvimbo yokutanga. 1 VaTesaronika anoudza uppståendelsen ungano pokutanga, asi Matt 13 vakaona kuti tanga vasakarurama hunobviswa panyika. Mapoka acho haagoni kuva wokutanga anofanira kubviswa zuva?
Pindura: Kune zvakaparadzana zviitiko zviviri kuti havambokwanisi kuitika panguva imwe chete .
Chokwadi kuti vakaponeswa vachapiwa mubayiro nekorona panguva pakubvutwa (dare kwaKristu) sei kuti vakuru 24 nechekare nazvo (Zvakazarurwa 4: 4-10) Kunyange kana pakubvutwa kwakaitika?
Pindura: The Kutorwa anofanira raitika chisimbiso chokutanga pamberi runovhuniwa.
Nei makwai nembudzi vave akaparadzaniswa shure kwokutambudzika avo vagara vari vachatorwa? (Mateu 25: 31-33)
Mhinduro: With pakubvutwa haina kuitika pakudzoka kwaJesu chinooneka, saka itai makwai nembudzi (vapenyu vanhu vari kutambudzika) kuparadzaniswa pamberi Millennium.
Tichaitira kupi "Kusaponeswa" kubva zvose pana pakuguma Millennium? (Zvak 20: 7-10)
Pindura: Kune vanhu vakaberekerwa kweMakore Ane Chiuru. Ndivo vana vaya vakapinda Millennium ravo dzinongoitika miviri.
Ndiani uyo anodzora kuitira kuti kwaAntikristu hamungavuyipo mberi?
Mhinduro: Mutsvene muchechi iri chinonyanya kuvhiringidza kwaAntikristu hamungavuyipo mberi.
akavimbisa Jesu Johani 14: 1-3 kuti aizonovagadzirira nzvimbo kuvatendi kudenga, uye ipapo kudzokera kutora nesu apo iye. Pre-trib anoti Jesu achadzoka panyika kuti ikoko pamwe neungano yake. Sei Jesu kundokugadzirirai nzvimbo kwatiri kudenga uye haana kutora isu ikoko?
Pindura: Post-trib dzidziso kwakaoma chaizvo kutsanangura Johane 14: 1-3
Kuzivisa raJesu weNazareta
Ruka 4:. 18-19 - "Mweya waShe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza, kuti ndiparidzire evhangeri kuvarombo Akandituma kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa uye kuzoita kuti mapofu aone, kuti vape wakamanikidzwa rusununguko uye ndiparidze gore raShe
E akatevera Jesu paakaedzwa murenje, akasvika Nazareta, uko akaverenga Isaiah 61: 1-2 uye akazivisa kuti mashoko aya akanga auya zvechokwadi. Chinhu kuona ndechokuti Jesu anomira pakati-mutongo pasina ndakapedza chiprofita chaIsaya.
Chikonzero Anodzivisawo Jesu pakati ndima ndechokuti chendima iyi yokutanga ave kuuya chake chokutanga uye ushumiri hwake hwepasi kuita. Chikamu uprofita yechipiri chete kupera pashure chechi iri ratemwa panyika.
Mabasa 15: 13-18 - "Brothers, nditeererei Simioni arondedzera sei Mwari pakutanga nechokwadi akakunda vanhu vezita rake pakati pemarudzi Hazvina inopindirana nemashoko avaporofita, iyo inoti: Zvino ndichadzosa.. uye vanovakazve ugaro chaDhavhidhi vafa. matongo awo ini vachavakazve, uye ndichaita akarimisa,
D pano mamwe zvouMwari zvikonzero kuti kereke achapiwa kubvutwa pamusoro 70 uye yokupedzisira vhiki dzemakore.
Kana mukuru chikonzero kwevhiki 70 ndiko kupedza zvipikirwa nhanhatu kuna Israeri kuti tinoona Dhanieri 9:24, ipapo ungano asati ipapo. Jacob anopupura kuti muna Mabasa 15, sequentially pashure Assembly nguva panyika, Jehovha aizoisa pfungwa dzake uye mberi kwayo chirongwa naIsraeri. Kutorwa kuchaitika pane imwe yoga nguva pfungwa pane kudzoka kuonekwa kwaShe Jesu ane zvirongwa zvakasiyana Israeri uye Chechi.
Kutambudzika Nemamwe mashoko, vaviri vaiita. Neimwe kunatsa Israeri, uye wechipiri, kuparadza uye anoumba pamwe asingatendi marudzi. (Jer 30: 1-11). Ungano haisi nezvinangwa izvi.
The hwamanda 7
Zvakazarurwa 11:15 - The Ngirozi yechinomwe yakaridza bhosvo rayo . Zvino wakati anzwa mudenga simba nemanzwi uyo akati: ". Ushe hwenyika ikozvino runobva kuna Ishe wedu nehwaKristu wake, uye achatonga nokusingaperi-peri"
E N Vamwe vanoti pakubvutwa uye kumuka kuti kunoitika rekupedzisira hwamanda kwakafanana iri 7th uye nehwamanda yokupedzisira tinosangana pakutambudzika. Asi hatifaniri kunyonganisa nomwe hwamanda Zvakazarurwa 11:15, pamwe hwamanda wokupedzisira kuva Rumuko.
Chokutanga, pane musiyano pakati zvose nyaya uye kukanganisa izvi mabhosvo maviri apo hwamanda raMwari hwamanda yeruponeso, mukusiyana kuti hwamanda nomwe tinosangana muna Zvakazarurwa iri kutongwa kwenyika ino. Kwehwamanda Mwari rakapihwa kune rumuko, uye kuunganidzwa kwevanhu vaMwari.
NdiShe ichivhuvhuta hwamanda Zvakazarurwa, asi ngirozi kwete. Apo ngirozi vachiridza hwamanda, ndiyo chiratidzo kuti kutambudzika kukuru kunotanga, uye okupedzisira 3.5 makore zvingave yatanga. Uye pakupedzisira, kana hwamanda yaMwari rinonzwika saka transmutes izvozvo chete chiitiko chikuru, apo rechinomwe hwamanda zvabudiswa zviitiko akawanda akasiyana.
1 VaTesaronika 5: 2 - Kana nguva nemwaka, hama, hatidi kuti tikunyorerei. Imi munoziva kwazvo kuti zuva raIshe rinosvika sembavha usiku. vanhu kana vachiti, "Rugare norunyararo," ipapo vanotambura kuparadzwa sezvo pakarepo sezvo marwadzo anouya mhiri mukadzi pamuviri, uye havangapunyuki. Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iroro rikusvikirei sembavha.
M chiutsi vanhu vaite uye rinoreva zuva raShe ave mashoma uye yakananga zuva maawa 24, zvinotora nzvimbo pakupera kutambudzika apo Jesu kudzoka zvinooneka. Saka zvinoreva kuti zuva raShe uye kubvutwa zvakafanana uye anobuda imwe.
Zvichida kupfuura ambotaurwa ndima inongova 1 VaTesaronika 5: 2, iyo inotaura kubvutwa chokuita nezuva raShe. Sezvo zuva raJehovha sezvakaita Jesu anouya se "mbavha usiku" unobatanidza iwe kazhinji kunyonganisa izvi zviitiko zviviri.
Asi kudzokorora mamwe bivelverser iyo inotaura Day raShe inoratidza kuti hazvina chete kureva rimwe zuva chete, asi kwenguva mutongo kufukidza vaviri ekutambudzika, Jesu kudzoka zvinoonekwa Millennium.
Joel 2: 11-20 - Day raShe zvinosanganisira kurwisa kubva muvengi kubva kumusoro, uko vazhinji vanotenda ndiro Kurwisa tinoona Ezekiel 38-39. Vazhinji vanodavira kuti Gogi / naMagogi hondo rikaitika chikamu ekutambudzika wokutanga.
Joel 3: 4 - Hechino zuva raShe yakasungirirwa kudzoka kwaJesu chinooneka uye ake mutongo pamusoro pamarudzi.
2 Petro 3: 10-23 - Here zuva raShe havagoni kureva kudzoka kwaJesu chinooneka, ipapo tinoziva kuti zuva mitumbi yokudenga zvichanyungudutswa, uye tinowana matenga matsva nenyika itsva munzvimbo yokutanga pashure pemakore 1000 kubva Empire.
Zvakazarurwa 20: 4 - Zvino ndakaona zvigaro zveushe, vakagara pamusoro pazvo vakapiwa simba rokutonga. Uye ndakaona mweya vakanga musoro nokuti vapupura Jesu uye shoko raMwari uye vakanga vasina kunamata chikara nomufananidzo uye vasina kugamuchira mucherechedzo wake pahuma kana ruoko. Vakararama vakabata ushe pamwe naKristu makore churu. Asi vakasara vevakafa havana kuraramazve kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwokutanga.
Dkumuka yokutanga muna Zvakazarurwa 20: 4 ndiwo zvakare chinhu kuti nhaurwa neshure, uye ndinofunga kuti shoko Bhaibheri taura kuti pacharo kana tikariverenga. Tinogona kuona mundima kuti inotaura rumuko, uye kumuka kwokutanga. Ipapo tinogona kuona kuti, uye pane kutaura pamusoro Vakaurawa kumuka pashure pokutambudzika. Asi zvinoreva kuti kumuka kwokutanga chete rine vakafira kutenda kubva pakutambudzika? Kwete, Chokwadi kwete.
D kumuka kwokutanga zvakawanda pamusoro kuti worumuko mhando ndiyo. Tinogona kuona kuti pane mhando mbiri vakamutswa. The yokutanga ine husingaperi naMwari, uye rumuko chechipiri nokusingaperi pasina Mwari. Zvapedzisira Kumutswa, inova kuparadzaniswa naMwari nokusingaperi, anoumbwa zvose kuvatadzisa vakafa kubva dzose nguva, uye kunoitika pashure pemakore 1000 kubva Empire. (Zvak 20: 5)
Kumuka kwokutanga izvo zvakaenzana husingaperi naMwari kunoitika maitikiro siyana. Mutestamende itsva, tinoona Kumutswa akasiyana siyana kuti zvose kupinda pasi category "kumuka kwokutanga".
1. Jesu 'kumuka pazuva retatu. Jesu 'kurwadziwa ruponeso ndechekuti chikwata vose mheremhere. Dai akanga asina kuyananiswa chivi hondo yose wacho anenge 2000 apfuura, akanga isu vasina kumuka kubva kuvakafa. kumuka kwaJesu ndiyo rumuko yangu.
2. Kumutswa vamwe vanhu vari GL Testament tid.- VaHebheru 11:35
3rd The vatendi kubva GL Testament yakaitika chokuita naJesu 'rufu uye rumuko. Matt 27: 52-53
4th Assembly The Christian kubvutwa pamberi kokupedzisira uye 70 vhiki dzemakore Israeri neJerusarema.
5. Kumutswa nezvapupu zviviri pakuguma kutambudzika - Up 11:12
6. Kumutswa of GL Testament vatendi uye Vakaurawa pakutambudzika, zvinotora nzvimbo chete pamberi kudzorerwa umambo hwaIsraeri. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
M nemhute zviitiko kuti atore nzvimbo pakutambudzika uye kukurukura kudzoka kwaJesu anotiratidza kuti zvakakodzera kuti rwepanyama mukaha pakati kubvutwa Assembly, uye Jesu kudzoka anooneka. Vamwe zviitiko anoratidza izvi:
pechigaro chokutonga chaKristu
2 Corinthians 5:10 - Nokuti tose tinofanira kumira pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, kuti mumwe nomumwe apiwe zvaakaita muupenyu huno, zvakanaka kana zvakaipa
G uds shoko rinotidzidzisa kuti tose rimwe zuva vachamira pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, uye kuti räkenskab mabasa edu. A dare kuti ari ravakadzikunurwa uye kwete kuti kuvhiringidzwa kutongwa pa chigaro chikuru chichena pashure pemakore 1000 kubva Empire. Shoko rechiGiriki dare iri "nebema", uye ari saka kunzi "Beema mutongo".
1 VaKorinde 4: 5 - Lower saka hapana mutongo akashaya, Ishe pamberi auya. Anofanira Penyesai sezvo rima anovanza uye pfungwa mumwoyo nevavariro, uye panguva iyoyo mumwe nomumwe acharumbidzwa kwake Mwari
dare iri anofunga pakarepo yakasungirirwa upprycklsen, izvo zvinoreva kuti kana Assembly anodzoka naKristu pasi, vanga pamberi pechigaro chekutonga chaKristu, kuti modtaga mubayiro wavo.
N Ågot sezvo bekräfter kuti dare iri kuitika pakarepo kuti knot kusvika pakubvutwa ndivo vakuru 24, rinomirira Assembly wakazara simba. Vari panzvimbo chigaro choumambo chaMwari, kuti Kroner mumusoro, uye akagadzirira kushumira Jehovha munguva yokutambudzika, asati ipapo kuti Jesu inotanga chisimbiso chokutanga muna Zvakazarurwa chitsauko 6
Kana vakuru 24 anomiririra ungano, zvinoreva zvinhu zviviri. Zvino nguva inodiwa pakati pakubvutwa uye pakutanga 70 årsveckans, uye kutangira mutongo uye asati bhiza rokutanga acharegererwa, ungano kare munzvimbo yokudenga.
Kutongwa marudzi uye navaHedheni
D semhanza vaHedheni hakwaikwanisika kana kwaisava nokuda rwepanyama pakakoromoka pakati kubvutwa uye kudzoka kwaJesu zvinooneka. Sei kumwe zvose vakaponeswa uye Kusaponeswa, vachiri yavo kwomuzvarirwo mitumbi anogona kuparadzaniswa kana vakatendeka vakanga vatova Dzurwa vakachinja kubwinya mitumbi?
Kana kubvutwa chinoitika pashure kutambudzika nyore kuwana chikonzero kugovera vanhu pamberi Millennium. Tingadai nechekare kudai uppdelining chokuita pakubvutwa apo Jesu akaratidza rutsoka paGomo reMiorivhi.
M EOPLE vanoponeswa pakutambudzika vachaenda zvavo dzinongoitika miviri muMireniyamu. Vanhu ava vachaita basa, dzimba nevana. Tisati kupinda Millennium, achava hapazovizve vanhu vazhinji panyika, kusiyana kuguma kutambudzika, kana murume achava vashoma kupfuura ndarama tsvene yeOfiri? (Is 13: 9-12)
In zera apo muJudha nemuJentairi vakava muviri mumwe aida nguva pakaputsika kuna Ishe mberi chirongwa naIsraeri. The 70 uye yokupedzisira vhiki makore ndiyo nguva apo Ishe achaisa zvakare kwayo pfungwa vaJudha uye veIsrael rudzi.
Kuguma församlingenstid panyika rinopedzisa kwete chete uprofita mubhaibheri asiwo zvairatidza rinofanirawo pakakoromoka pakati kubvutwa uye kudzoka kwaJesu zvinooneka. Vose pachigaro Kristu, vakuru 24, kutongwa marudzi, vanhu pamusoro chemakore uye Ishe chirongwa vaIsraeri kutongwa, uye anoratidza izvi.
V muna kurarama munguva yokumirira. Munguva iyi, uye vari kutarisira kuti Jehovha achakurumidza kudana nesu kumba kwaari. Ndiri zvikuru zvakasimba zvandinotenda kuti tiri chizvarwa akasarudzwa kuti vachava nyasha kuwana, hwamanda raShe chando chokudenga uye ngirozi unodanidzira.
Ungano chakatangira pana Mwari Kudururwa kwomudzimu Mweya paPendekosti, uye ichaguma pamwe nekutorwa ungano. Zviri kumusoro nguva kusimudza misoro yedu, nokuti nokukurumidza kusvika tinunurwe.
Hazvingaiti ndima muTestamende Yekare kana kuti Testamende Itsva kureva kuti kereke vachaenda pakutambudzika nguva, kana kuti kereke inofanira kumira chiso nechiso pamusoro kwaAntikristu.
Kutambudzika anonzi "dambudziko raJakobho" (Jer30: 7), asi Haritumidzwi "ungano kana chechi kutambudzika".
Ngirozi Gabrieri akazivisa Dhanieri kuti vhiki 70 dzakanga dzakatemerwa vanhu vako (vaJudha) uye neguta rako dzvene (Jerusalem). Kereke haina kutaurwa pano. Dan 9:24
Kereke haana mugove vhiki 69 okutanga, uye hazvizovi chikamu rokupedzisira uye kwevhiki 70.
Revelation kubvutwa kunoitika muna Chapter 4: 1 iyo vari kutambudzika nguva kunorondedzerwa Chapter 6-19. Vakuru 24 anomiririra ungano iri panzvimbo pamberi chisimbiso chokutanga yaputswa.
The chechi iri kutaurwa nguva makumi maviri muzvitsauko zvitatu Zvakazarurwa wokutanga, asi ari kumbobvira kutaurwa pakati zvitsauko 4 uye 19.
Kutambudzika nguva anonziwo "zuva rokutsamwa" (Zef 1:15) muBhaibheri, asi Jesu haana tigadzirirei vokutsamwirwa. (1 Th 5: 9), asi isu kubva "hasha" (1 Th 1:10)
Kutambudzika nguva rinonzi Zuva raIshe muBhaibheri (Zef 1:15). Asi 1 VaTesaronika 5: 2-3 inoti zuva raShe (kutambudzika) richauya sembavha usiku. vanhu (vasingatendi) Kana vachiti, "Rugare norunyararo," ipapo yarova (vasingatendi) nokuparadzwa sezvo pakarepo sezvo marwadzo anouya mhiri mukadzi pamuviri, uye ivo (vasingatendi) haangapukunyuki. Zviri pachena kuti kutambudzika chinhu kuchawira disbelievers, asi haibatanidzi akatendeka uye kuponeswa.
Tichafara kunyaradza mumwe nehurukuro pakubvutwa (1 VaTesaronika 4:18). Hapana nyaradzo pakudzidzisa kuti anoti kereke vachaenda kuburikidza chikamu kana zvose kwokutambudzika domstid.
Jesu akavimbisa kereke pana Philadelphia kuti aida kuchengetedza kereke, uye "kukununurai kubva paawa mumuedzo, zvichazoitika pamusoro nyika yose uye kubudisa vanhu vayo kuti bvunzo." (Zvak 3:10) Mwari akapikira kuti achengetedze ungano akatendeka mukutambudzika nguva .
Sezvo Enoki akatorwa akakwidzwa kudenga pamberi mafashamo uye Noa akanga akachengetedzwa kuburikidza Mafashamo, kuti Assembly achapiwa kubvutwa pamberi kutambudzika uye Israeri residual kuchengetedzwa pakutambudzika.
Nenzira imweyo kuti Mwari aigona kutonga Sodhoma neGomora Roti isati kure neguta, Mwari haagoni kutonga nyika ino isati vakarurama aenda. (1 Gen. 19:16)
Jesu akataura pakutambudzika nguva apo akabvunza: ". Vaka nguva dzose uye kunyengeterera simba kupukunyuka zvinhu zvose zvichauya uye kuti mugogona kumira pamberi poMwanakomana womunhu" (Ruka 21:36) Hazvina musoro kuti Jesu anokumbira chinhu haasi kuda kuchengeta.
Maraki 3:18 inoti Ishe (ari Patakasvika) achatiratidza kusiyana kowakarurama nowakaipa, kwouya anoshumira Mwari uye asina kumushumira. Pre-trib vanodavira kuti Jehovha anouya kuunganidza ungano yake, ipapo isu vauya naye kutonga pakati vakarurama nevasakarurama.
Panguva kubvutwa, Jesu anouya kuti chechi yake (1 VaTesaronika 4: 16-17) paanouya pakupera kutambudzika, unouya pamwe neungano yake. (1 Th 3:13).
In tsamba kukereke nomwe kuti akakoka Jesu kuti "kunzwa zvinoreva Mweya kuungano." Asi kutambudzika kukuru, pashure kuti Mweya Mutsvene muchechi iri kurutivi akagara, anoti: "Uyo ane nzeve, ngaanzwe" (Zvakazarurwa 13: 9) Iye rinosiya kuti Assembly, apo pasina chechi kuteerera Mweya anotaura uye kuenda pakutambudzika.
Munhu Anopesana naKristu ndichakuita hondo nevatsvene, uye vane simba rokukunda navo. (Zvak 13: 7). Asi harigoni kuva Township kutaurwa pano. Jesu pachake akavimbisa kuti "helvets zvengarava haafaniri ungano simba." (Mateu 16:18)
D kumuka kwokutanga muna Zvakazarurwa 20: 4 ndiwo zvakare chinhu kuti nhaurwa neshure, uye ndinofunga kuti shoko Bhaibheri taura kuti pacharo kana tikariverenga. Tinogona kuona mundima kuti inotaura rumuko, uye kumuka kwokutanga. Ipapo tinogona kuona kuti, uye pane kutaura pamusoro Vakaurawa kumuka pashure pokutambudzika. Asi zvinoreva kuti kumuka kwokutanga chete rine vakafira kutenda kubva pakutambudzika? Kwete, Chokwadi kwete.
Kumuka kwaJesu pazuva rechitatu. Jesu 'kurwadziwa ruponeso ndechekuti chikwata vose mheremhere. Dai akanga asina kuyananiswa chivi hondo yose wacho anenge 2000 apfuura, akanga isu vasina kumuka kubva kuvakafa. kumuka kwaJesu ndiyo rumuko yangu.
Kumutswa vamwe vanhu vari GL Testament tid.- VaH 11:35 The vatendi kubva GL Testament yakaitika chokuita naJesu 'rufu uye rumuko. Matthew 27: 52-53
The Gungano Christian kubvutwa pamberi kokupedzisira uye 70 vhiki dzemakore Israeri neJerusarema.
Kumuka nezvapupu zviviri pakuguma kutambudzika - Up 11:12
Kumutswa GL Testament vatendi uye Vakaurawa pakutambudzika, zvinotora nzvimbo chete pamberi kudzorerwa umambo hwaIsraeri. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
D and Ichi chikamu mana akatevedzana - dzoka kwaJesu asati kutambudzika, wandakaisa ambonyora zvinotevera namagwatidziro:
Zvokupikisa ja nyaya
E NE nyaya dzinowanzoshandiswa kukurukurwa patinotaura pamusoro Pre-trib dzidziso - kuti kubvutwa ungano pamberi kutambudzika kana wokupedzisira vhiki dzemakore - iri pamwe Pre-tribs inhoroondo yakakurumbira Margeret McDonald uprofita kubva 1800s izvo kwakakanganisa John Darby mu dzidziso yake.
Both pfungwa Ndinofunga anonakidza nekuti dzinowanzotaura sechinhu pakaunda nharo patinotaura Pre-trib dzidziso, iyo zvino chaipiwa sedzidziso itsva, uye vasina kare adzidziswa nhoroondo yekereke. This post achatora yakavakirwa paanopikiswa izvi uye mibvunzo.
The inonyanya yemabhuku-nharo
E NE of inonyanya argment nedzidziso Pre-trib iri saka "zviri dzidziso zvakare matsva kuti dzechokwadi." Asi pane matambudziko akawanda pamwe nharo ichi. Chokutanga ndechokuti anofuratira chokwadi chokuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti kunzwisisa yokupedzisira uprofita vasiri kuzivikanwa kana kuratidzwa pamberi nguva kuti izvi zvakafanotaurwa zvinoitika.
Apo Daniel akamuka vamwe uprofita buritsa kuguma nguva iye, akapindura Jehovha kuti haana kuzvinzwisisa. Ishe Daniel akapindura kuti "mashoko aya kuramba zvakavanzika uye nechisimbiso kusvikira pakuguma kwenguva." (Dan 12: 9)
Kunzwisisa shoko rouprofita
N iri nemamwe mazwi, tinoona shoko raIshe nokuzadzikiswa tichitarisa uprofita yemubhaibheri, saka nesuwo kuwana kunzwisisa zvakarurama shoko rouprofita.
Hazvishamisi kuti nhoroondo yekereke zvave mibvunzo pamusoro uprofita Ezekieri 48, iyo inotaura muchinda Gogi rimwe zuva varwise Israeri mubatanidzwa kunyika Muslim. Nokuti zviuru akawanda, Israeri haana kurarama, uye uprofita anotaura pamusoro kurwiswa pamusoro nyika kuti haapo, akasika kuvhiringidzika.
Other uprofita chokuita zvose nhoroondo yedu asiwo muzvigadzirwa kukura kuti isu takambova ichangopfuura emakore, chinhu chinofanira kunge chakavanzika vanhu vakararama kare. Sei munhu kutsanangura zvapupu zviviri chaZvakazarurwa chitsauko 11, umo vose rufu dzavo uye rumuko, kuti nezvako yose? Kana mufananidzo wechikara anouya mupenyu uye anotaura vanozvirumbidza mashoko?
Tichafara mune mamwe mazwi, kunzwisisa zvakarurama shoko rouprofita sezvatinosvika pedyo panguva yaro zvasvitswa.
Spiritualising Uprofita hweBhaibheri
D and chokwadi kuti zvikamu shoko rouprofita yave zvakavanzika uye zvakaoma kududzira kusvikira tinoona Payakapera, chinhu kuti ave inozivikanwa zvikuru nhoroondo yekereke.
Mugore 430 CE. Vakanyora chechi baba Augustine bhuku dzinoti "City waMwari", iro runoonekwa somumwe ake anokosha uye inflytelsesrika anoshanda. Uprofita Augustine spiritualized Bhaibheri uye nharo kuti mireniyumu (Millennium) yakanga yatotanga uye aizoramba kuuya kusvikira waJesu wechipiri.
Uprofita yemubhaibheri kuti, nemamwe mashoko haagoni kunzwisiswa kana sezvadziri. Yakanga spiritualization ichi uprofita zvebhaibheri vakanga unotara nhoroondo yekereke uye nenzira förtolkade navo zviuru zvemakore anotevera.
Kereke yokutanga madzibaba
M pamberi tine "chokudzoka" uprofita yeBhaibheri apo takatanga zvakare kuona uye kuhududzira sezvariri kuti, zvisinei zvinoratidza nhoroondo yekereke mukuwedzera vapostori, saka aivawo mangwanani Fathers of Dzokuvaka dzidzo yavo, inova hwaro pre-trib dzidziso . Uyewo chokwadi kuti anenge ose vechechi vokutanga vakaparidza Premillennialism.
Justin Martyr (aizivikanwawo Justin, Muzivi 110-165 e.Kr) izvo zvakabatsira zvikuru kuzoumba dzidziso yeChechi, vakatosvika kuti akaronga kuti kana munhu akaparidza chimwe, aiva muhedheni. (1)
A chokudzoka uprofita yemubhaibheri
E akatevera makore akawanda rima romudzimu kuMiddle Ages muEurope muna takawana Reformation, uye zvishoma nezvishoma takatanga kuona chokudzoka uprofita yemubhaibheri apo förtolkningen kwakanga chaiwoiwo.
Izvi "mwoto" vakatanga zvakakomba pakati nevaPuritan, munhu reformatory sangano yakabuda muEngland akapoteredza 1560s, iro akakurumidza kwakatungamirira kunzwisisa pakubvutwa yaiva yoga chiitiko raJesu chinoonekwa kuuya.
Vatungamiriri vavo "Tiwedzereiwo Mather" chaiva kereke Puritan, Oman uye nyanzvi akanga simba guru pamusoro poupenyu Massachusetts womudzimu vakati Saints vakanga "abatwa kudenga, kuti kutiza okupedzisira mundima moto". (2)
A wenhoroondo budiriro
F N kuti kuramba kuti dzidziso Pre-trib ari "dzidziso itsva" uye anotsanangura chete John Shona kudzidzisa, zvinotevera akamborarama kukura ane utplock okuti kubudikidza veChechi uye vanhu vakaratidza Pre-trib pfungwa mukudzidzisa kwake nokuda nhoroondo yekereke.
Izvi zvinoreva kuti kana vanhu vanoti kudzoka kwaJesu asati kutambudzika, kana kuti dzidziso Pre-trib dzidziso haisi kuparidzwa pamberi 1800s, zviri hadzisi dzechokwadi. Kuti aratidze kuti dzidziso iyi dziripo kare kare John Darby, pano inongova mienzaniso mishomanana vanhu uye madzibaba chechi uyo akataura pfungwa iyi:
The First Epistle of Clement, 23, rakanyorwa kumativi gore 96 AD - kuti zvingava Clement sezvo VaFiripi 4: 3 inotaura somutungamiri mukereke kuRoma. " Zvirokwazvo, nokukurumidza uye pakarepo Ko Yake kuchapera , Gwaro sezvo unopupura Uyewo, achiti," Seedily achauya, uye haanganonoki ", uye" Jehovha Ko pakarepo patemberi yake, kunyange Mutsvene nokuda uyo amunotarisa ".
Muna Second Epistle of Clement, tinoverenga kuti: " Ngatirangarirane kuti ose awa Zvaungatarisira umambo hwaMwari norudo uye nokururama, kwete Nokuti tinoziva zuva raShe Kuratidzwa ."
Irenaeus 130-202 AD - anonyora mu bhuku rake "Against dzakatsauka dzinoparadza 5:29 -" Zvino ipapo pamberi, kana pakupedzisira muChechi Ko pakarepo kubatwa kubva ichi, zvinonzi akati: "Kuchava kutambudzika kwakadaro kusati kwakambovapo kubva pakutanga, kana kukumbira" .
The Didache, 70-180 AD - Chapter 16, Chikamu 1: Svinurai pamusoro hwako; ngakurege mwenje yenyu kurege kuzodzimwa, kana zviuno zvenyu ungired, asi gadzirira, nokuti hamuzivi nguva Ishe wedu achauya. "
Tertullian 155-245 AD - Asi chii chiseko Ko kuti kuswedera kwatombova Ishe wedu !, Ikozvino anazvo zvose, zvino zvikuru, zvino One kukunda "
WeSaipuresi, 200-258 AD, akanyora zvinotevera mu "akadhindwa ose weSaipuresi" umo zvaanorondedzera kuguma nguva uye kutambudzika kukuru: "Haumbotyi kuvonga Mwari, hamuzivi kundomukwazisa pachako, kuti kubudikidza vachiri kuenda iwe vanobviswa , akarwira kubva yokuputsikirwa nengarava uye njodzi iyoyo ava pedyo ? Ngationei kwazisai zuva Ndezvipi ibasa tose kuti kumba kwake, Izvo anobvuta isu hense, uye akatisunungura kubva mumusungo wenyika.
The Mufudzi naHerimasi (makamutsiridzazve 140 AD) aiva munyori wechiKristu uyo kwainzi kuva mumwe Apostolic Fathers. Akanyora zvinotevera pamusoro kukuru: " Kana imi The zvino Zvigadzirei, uye kupfidza nomwoyo wako wose uye dzokai kuna Jehovha, zvichiita kuti kutiza nayo " (6)
Victorinus (zvinozivikanwa mugore 270 AD uye akafa 303 AD) akanyora kutaura pamusoro peBhuku yaZvakazarurwa, uye vakanyora zvinotevera pamusoro Up 6:14 - "Zvino kudenga Drew sezvo rwakapetwa rwuchipeterwa pamwe. Nokuti denga rakungurutswa, Kuti Church huchatorwa. "Uye makomo ose nezvitsuwa akabvisa fromtheir nzvimbo dzapedyo Kuti In The Last Kutambudzwa zvose asi akaenda fromtheir nzvimbo; ndiko kuti, kuti zvakanaka zvichabviswa, vachitsvaka kudzivisa Kutambudzwa.
· Ephrem muSiriya (306-373 AD) - " Nokuti vose Saints uye vasanangurwa vaMwari vakaungana, risati ekutambudzika Ndiko kuuya, uye vari kuendeswa Ishe varege kuona kuvhiringidzika Ndiko kuti iyerere World nokuda kwezvivi zvedu "(On Okupedzisira Times, kwaAntikristu, uye Mugumo World, pakati Ephrem muSiriya, 373 AD (7)
John Calvin - chechi muvandudzi vaigara 1500s. " Gadzirira kutarisira naye zuva nezuva, kana pane nguva dzose " "Sezvo Akavimbisa Kuti achadzoka nto kwatiri, tinofanira kuchengeta pachedu vakagadzirira, panguva dzose nguva revieve kwaari." "Nhasi tinofanira kungwarira kunzwisisa nokukurumidza kudzoka kwaKristu. "
Martin Luther akataura sezvinotevera: " Ndinotenda kuti zvose chiratidzo, ndechipi kuti anoteverwa okupedzisira havealready akaonekwa. Ngatiregei kufunga kuti kuuya kwaKristu ari kure ; Ngatitarisei kumusoro misoro kusimudzwa; ngativei kutarisira Mununuri wedu kuuya nokushuva uye anofara pfungwa. "
Mubhuku rake rinonzi, "Kunzwisisa End Times Uprofita, acclaimed Paul N. washington, aivapo akawanda vari 1600 uye 1700s akatanga kudzidzisa kubvutwa wakaparadzana kudzoka kwaJesu zvinooneka. (3)
Peter kudzanai, akadzidzisa mubhuku rake rinonzi "Achisvika kununurwa chechi" muna 1687 kuti Kristu aizouya mudenga kutanha navatsvene vose uye kudzokera kudenga pamberi paAmagedhoni. Akataura mukubvutwa kwakavanzika risati kwaShe kuuya mukubwinya uye simba.
Firipi Doddridge uye John Gill Zvakataurwa musi NT (1738 uye 1748) kushandisa mashoko kuti kubvutwa uye Ishe imminenta kudzokera.
A Babtist VaMorgan Edwards, uyo akaberekwa uye vakashumira vari Wales asati kutamira kuUnited States muna 1761. Muna 1740 kuti akapa Morgan mashoko ari Pre-trib pfungwa sezvo achidzidzisa kwemugumo.
James Mcknight (1763) uye Thomas Scott (1792) akadzidzisa kuti vakarurama vaizotorwa kudenga, uko vaizova norugare kusvikira mutongo waMwari aitarisira (9)
J ohn the Darby akaberekerwa muLondon, uye ndiye aizova simba zvikuru pre-trib dzidziso, sezvo iye zvakanyatsorongwa akaisa zvakafanana pashure akadzidza yacho.
Darby akagumisa kuti panofanira kuva nomusiyano wakajeka pakati pevaIsraeri Church, akava nechokwadi dzaJesu imminenta 'kudzoka, izvo zvinoreva kuti Ishe anogona kudzoka chero nguva, pasina zvimwe antecedent vatambi. Muna 1827, akanga vakava dzimwe nheyo dzinokosha kwaizoratidza mutsva zvouMwari ezvinhu anozivikanwa se "dispensationalism".
Margeret MacDonald uprofita
N Ågot kunokosha kuti kubata uye kuti ave bumbiro zvikuru nhaurirano uye vanorovha kunzwisisa, ndizvo chaizvo uprofita Margeret MacDonald kuti anonzi kuva izvo akaita Shona dzidziso uye zvechitendero. Pfungwa chakaitwa kare muna 70s kubudikidza Dave MacPherson mu "The Risingadaviriki Pre-Trib Origin 1973 (5)
Dave MacPherson aiva nepfungwa inozivikanwa zvikuru pamusoro nharo riri kuna Constitution nokuda Pre-trib dzidziso ndeyenhema.
Margeret, ipapo 15 makore, angadai muchirongwa munhu anokwezva munamato musangano Scotland - muna 1830. Ikoko, angadai akaprofita uye kupiwa uprofita umo iye akataura kuti pakubvutwa zvaizoitika pamberi kutambudzika.
J g Links ichi neuprofita zvawo kuitira kuti iwe pachako unogona kutonga. Zvinosuruvarisa, rugwaro rwacho harusi akashandurirwa Swedish:
Heino imwe Excerpt muuprofita wandakaisa pachena rugwaro unofadza:
" Mumazuva akaona Vanhu Good mumamiriro ezvinhu awfully ngozi, takakombwa mambure uye entanglements, kuda kutongwa, uye vazhinji kuda kunyengedzwa uye zviitiko. Zvino vakaipa kucharatidzwa, nesimba rose nezviratidzo nezvinoshamisa zvenhema, kuti kana zvaibvira chaiye vakasanangurwa chichaitwa kunyengerwa. - Ndiwo muedzo romoto Ndeupi kwatiri kuedza. - Zvichava pamusoro achinatsa uye zvokunatsa chaiye nhengo dzomuviri waJesu; asi Oh Ichava nomuedzo yomoto. mweya yose achazununguswa zvikuru pakati. The muvengi achaedza azununguse zvose takatenda - Asi kuidzwa kwerutendo chaiko vachawanikwa kukudza uye kurumbidza uye nokubwinya. Hapana asi zviri kuna Mwari richamira. The vanzwi pamaware-zvakohwewa mucharatidzwa pachena - rudo vakawanda kuda wakisi pachando I kakawanda saidthat usiku, uye chinangwa sezvo zvino Ko sure kuona munhu Kristu venhema kuonekwa panyika ino. uye hapana asi Kristu kurarama matiri anogona kuona yakaipisisa kuedza muvengi kunyengedza - kana zviri nekunyengera kose kwekusarurama achaita basa - iye willhave ari pakaunda-nebato zvose chikamu chokwadi chaMwari uye kutevedzera mabasa ose ari mweya. Mweya unofanira uye richadururwa pamusoro Church, kuti ave kucheneswa uye vakazadzwa Mwari - uye akarurama zvakaenzanirana Mweya waMwari anoshanda,
Izvi Zvikurukuru yezvakaita kutongwa, kuburikidza Ndezvipi Vaya vari zvakaitika Ndiani vachanzi vakakodzera kumira pamberi poMwanakomana womunhu. Pachava nomuedzo kunze zvakare, asi 'tis Zvikurukuru muedzo. Zvinonzi zvinounzwa pakadururwa noMweya, uye achaita zvakanaka Wedzera zvakaenzanirana Mweya wadururirwa. Yavasina Church iri kubva Anopesana naKristu. Rinova vakazadzwa noMweya Kuti Tine ngaurambe. End quote.
Kurambira uye zvokupikisa
O M unogona kunzwisisa zvinorehwa nouprofita uhwu, uchanzwisisa kuti anyatsooneka zvokupikisa maererano ichi uprofita Margeret, uye nenzira ringadai kufurirwa John Shona dzidziso:
Chekutanga, pane musiyano kuti huripo pakati uprofita uye mabhuku John Shona mangwanani. Chiporofita mugore 1830, asi makore kare akawanda apfuura, Darby akanyora mabhuku pamusoro mangwanani kubvutwa pamberi kutambudzika. Saka hazviiti kuti Darby kungadai mavara nouprofita uhwu.
Kutambudzika napakusuka moto
F nzeve Chechipiri, ndicho zvacho chaizvo uprofita haikwani. Kana uchida, ndinogona kuverenga uye kunzwisisa zvakanyorwa, saka hapana uprofita hunoratidza kuti Margeret kana akafunga kana akaporofita munhu pre-trib dudziro. Margeret "profita" kusanganisira zvinotevera:
"Uyu ndiwo kutongwa romoto Ndeupi kwatiri kuedza. - Zvichava pamusoro achinatsa uye zvokunatsa chaiye nhengo dzomuviri waJesu; asi Oh Ichava nomuedzo yomoto
Izvi Zvikurukuru hunhu kutongwa, kuburikidza Ndezvipi Vaya vari zvakaitika Ndiani vachanzi vakakodzera kumira pamberi poMwanakomana womunhu.
Yavasina Church iri kubva Anopesana naKristu. Rinova vakazadzwa noMweya kuti tichava kuchengetwa "
Apo Margeret anonyora kuti kutambura, kana kutongwa nguva kuchenesa ungano, uye Assembly kutambudzika vachaenda kuburikidza zvaizobva kwaAntikristu, zvino hakuna asi pachena post-trib pfungwa zvine chinhu kudzoka kwaJesu asati kutambudzika kuita.
Chechitatu, uprofita zvechokwadi akakodzera. Zvakakosha nyaya ndewekuti dzidziso iri yebhaibheri kana kwete, uye iwo mamwe mashoko shoko raMwari kusarudza.
Kutorwa ndiye "kwava pedyo" kana anoenderana
1 VaTesaronika 1:10 - Zvino kuti mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo akamutswa naMwari kubva kuvakafa, Jesu uyo ​​Akatisunungura kubva pakutsamwa kuchauya.
E NE chezvinhu zvinokosha chikamu patinotaura pamusoro pakubvutwa, ndechokuti "kwava pedyo," izvo zvinoreva zviri chokuita, uye chinhu here zvawaizotarisira kuitika chero nguva.
Zvinoreva shoko rokuti "kwava pedyo" ndiyo "unhu kana mamiriro oda kuitika" - An chiitiko kana ezvinhu kuti kuda kuitika. Saka patinotaura raShe "imminenta" kana chokuita kudzoka chokuita yokupedzisira uprofita, saka kunongoreva kuti kudzoka kwaJesu kuti kereke kuona chero nguva, pasina antecedent vatambi.
Shoko "kumirira" mundima iyi yeBhaibheri rinoshandurwa kubva pashoko "anamenein" izvo zvinoreva kuti "kumirira mumwe munhu kusvika." Zvinoratidza kuti "basa" mafungiro uye basa nemunhu ari kumirira.
Kutorwa - chiitiko unsigned
D and chete nzira kune kubvutwa muungano anogona kuva "kwava pedyo" uye unsigned, riri kuti zvinofanira kuitika pamberi kutambudzika kana wokupedzisira vhiki dzemakore. Nemamwe mashoko, hapana ouprofita zviratidzo kuti kufanoenda pakubvutwa, kana chinhu kuti Assembly vanofanira kuziva zvichaitika pamberi payo kuti chiitiko ichi kunogona kutora nzvimbo.
Kana chechi kumirira zvimwe chiratidzo, saka paisazova, kana kuva vanofanira 'kuramba kumirira raShe kudzoka. "
T vachirwara Kusiyana pakubvutwa ndiko kudzoka kwaJesu vanooneka ndiye "kwava pedyo", saka panofanira kuva zvimwe uchapupu kana zviitiko Jesu asati anogona kuisa tsoka dzavo paGomo reMiorivhi.
Chokutanga, Israeri anofanira kunge shure munyika yavo. Munhu Anopesana naKristu anofanira kunge akaswedera, uye tinofanira kuona nyangadzi yokuparadza uye chikara. vaprofita vaviri kuchauyawo mberi uye uporofite makore 3.5, uye kutonga kwaMwari uye hasha rinofanira kudururirwa pasi rino. Pakupedzisira, marudzi ose anofanira kutendeuka Israeri, uye isu achaidya sezvo neBhaibheri Amagedhoni.
Kushaya kutsigira mashoko
D and kuti kunokosha patinotaura pamusoro Assembly pakubvutwa, ndiko kuti iwe kungorega kuti kudarika zvachose kushaya iripo kutsigira mashoko, vimbiso husingaperi kune avo vanotsungirira uye kupa upenyu hwavo munguva yokutambudzika kutambura, kana zvipikirwa simba panguva mutongo kwaAntikristu wacho.
Zvaizova nzira chechi takatondeswa kuenda pakutambudzika nguva, Ishe angadai pachena kugadzirira uye kunyevera ungano yake pamusoro ichi.
G uds shoko anodana isu kuramba kuva kuramba kutarisira kudzoka kwaJesu, uko saka riri chiitiko zvechokwadi pasina antecedent vatambi. Heino mienzaniso dzimwe ndima dziri vaviri achinongedza uye kuratidza kuti kereke anofanira kurarama kuramba vakamirira Ishe wedu Jesu kuuya kuvanhu vake:
VaRoma 13: 11-12 - Chenjerai zvose izvozvo, zvikuru, sezvo muchiziva chii nguva kutambura, kuti nguva yasvika yokuti muka muhope. Nekuti zvino ruponeso rwedu rwava pedyo kupfuura patakasvika kutenda. Usiku hwaenda, zuva rava pedo. Naizvozvo ngatiswederei vakarasha mabasa erima uye akaisa zvombo chiedza.
1 Corinthians 1: 7 - kuti muri mumashure hapana chipo, ini kumirira wedu Jesu Kristu, ratidzo.
File 3:20 - Tichava yedu iri kudenga, uye kubva ipapo isu kumirira, uye Ishe Jesu Kristu seMuponesi.
VaFiripi 4: 5 - hwenyu ngahuonekwe kuvanhu vose. Ishe ari pedyo!
1 VaTesaronika 1:10 - uye mumirire Mwanakomana wake anobva kudenga, uyo waakamutsa kubva kuvakafa, Jesu, uyo anotiponesa pahasha kuuya.
Tit 2:13 - tichimirira tariro yakaropafadzwa uye kwaMwari mukuru neMuponesi wedu Jesu Kristu, anokudzwa kuonekwa.
VaHebheru 9:28 - uye iye achaonekwa rwechipiri richibva, kwete kutakura chivi asi kuzoponesa vaya kumutarisira.
VaHebheru 10: 37 - Nokuti pachine pfupi duku, uyo ari kuuya, uye iye haanganonoki.
James 5: 7 - Wait saka nokushivirira, hama, kusvikira Ishe auya.
James 5: 8 - Naizvozvo imwiwo Zvinokosha zvakaisvonaka uye simbisa mwoyo yenyu, nokuti kuuya kwaShe kwava pedyo.
1 Petro 4: 7 - The Kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo.
Jude 1:21 - Zvichengetei murudo rwaMwari, pamunenge vanomirira Ishe wedu Jesu Kristu ari tsitsi dzake vachakupai husingaperi.
Up 3:11 - I nokukurumidza ndichazvirumbidza. Bata zvaunazvo, kuti hakuna achakutorerai korona yako.
Zvakazarurwa 22: 7 - "Zvino tarira, ndinouya nekukurumidza.
Zvakazarurwa 22:20 - Unopupura zvinhu izvi unoti: "Hongu, ndinouya nekukurumidza." Ameni, uyai, Ishe Jesu!
Saka izvi zvakanga vamwe ndima muBhaibheri kuti tiratidzei tarisiro kuti Assembly vanofanira. Words kuti vanotaura pokudzoka kwaIshe ukama, uye Assembly vanofanira nguva dzose kugadzirira. Vanotaura nezverubhapatidzo kudzoka kwaShe pasina risati zviratidzo, uye ivo kukunyaradza uye kurudziro pasina chokuita navo kutambudzika.
Rushambwa - You Ishe wedu akauya
1 VaKorinde 16:22 - Kana munhu asingadi Jehovha, iye anofanira chakatukwa. Marana vachikitu.
E NE akasimba nharo kuti chechi yokutanga vaigara kugara tichitya kudzoka kwaJesu ndiyo nzira ivo akakwazisa nomumwe uye kuti Pauro anoshandisa mune imwe yetsamba dzake kuti: Marana'ta.
Shoko Marana'ta riri chiAramaiki uye rinoreva "Ndimi Ishe wedu, uyai!" It kwairatidza nechido Assembly uye kunzwisisa kuti Ishe aigona kuuya chero nguva. Saka apo Pauro anonyora yokupedzisira kukwazisa muna 1 VaKorinde 16, anoti kuti kana munhu asingadi Jehovha, anofanira kuva "rushambwa". Shoko rinoreva hasha, uye ipapo rushambwa "Marana vachikitu," kuuya kwaShe.
Kana Assembly asina tarisiro kuti dai Ishe auya, vakanga vasina kushandiswa kukwazisa ichi, rinova zvose munamato, chikumbiro uye kudanwa kuti kudzoka kwaJesu.
Paul akamirira Jehovha
1 VaTesaronika 4:15 - isu kwamuri neshoko raIshe, kuti isu vapenyu, tinosara kusvikira pakuuya kwaShe, zvirokwazvo hatizotangiri avo vakavata
Pauro anoshandisa shoko rokuti "isu" apo iye anotaura vaya vapenyu uye varambe kusvikira pakuuya kwaIshe, zvichireva kuti pakubvutwa kumboda kare zvinogona kuitika panguva Paul.
James 5: 8 - Naizvozvo imwiwo Zvinokosha zvakaisvonaka uye simbisa mwoyo yenyu, nokuti kuuya kwaShe kwava pedyo
Track vomuzuva raPauro raiva raShe kudzoka pedyo, uye anokurudzira ungano kurarama kugara tichitya Jesu kubva kudenga.
Patinotaura anodudzira nguva isu yatiri kurarama, uye tinotenda kuti isu tiri chizvarwa kuti Unozonzwa kudzoka kwaShe, nokuti isu neiko ouprofita hunhu yokutambudzika. Nokuda zviratidzo tinogona kuona kuti Zuva raShe riri kuuya, uye kuti marwadzo okubereka kuwedzera.
Nemamwe mashoko, zvemukati uye zvimwewo nezviratidzo dzinoratidza kuti 70 uye wokupedzisira svondo makore kusvika, uye nokudaro vo kubvutwa ungano.
J esse Forest Silver, akanyora mubhuku rake rinonzi "The waJehovha Dzokai akanyora Apostolic Fathers:" Vaifunga pokudzoka kwaIshe munguva yake. Vaifunga kuti nguva yakanga ukama, sezvakanga akavadzidzisa kuti vave takarinda nemafungiro. (13)
John F. Walvoord, nyanzvi yezvechitendero wechiKristu muchidimbu seizvi: "The nechepakati che vakararama trib pazvidya, kureva dzidziso Ishe imminenta uye vakarondedzera kudzoka, ndiyo basa rinokosha mukereke yokutanga, vaigara kugara tichitya yaJehovha kuuya wake gungano. (12)
H istorien inotiratidza kuti pasinei nokushaya guru chiono chouporofita, kana spiritualization shoko rouprofita kweanenge 1,000 makore kusvikira Reformation, saka ndiyo nhoroondo yekereke kuti chechi yokutanga uye vokutanga Fathers vaiva kuramba kutarisira kuuya kwaJesu.
Pre-kwemakore ane chiuru, izvo zvinoreva kuti kudzoka kwaJesu kuchaitika pamberi Millennium chaizvo rinenge akanyangarika mushure kuEphesus, imwe Ecumenical kanzuru muna 431 AD, kwakasarudzwa, uye asingaremekedzi ichi sezvo vemanyepo. Rakanga gare gare panguva Reformation kuti taigona kuona sei shoko rouprofita zvakare zvakavharwa mupenyu kuitwa.
dzidziso Pre-trib akanga systematized ari 1800s kubudikidza likes vaJohani Darby, asi kuti dzidziso haana kurarama asati iyoyo, sezvo kutaura kuti "kururamiswa nokutenda" akanga asiri dzidziso yechokwadi Martin Luther asati agamuchira zvakazarurwa izvi. Zviripachena vanhu akaparidza "kururamiswa nokutenda" pamberi 1500s, asi Jehovha akashandisa Martin Luther neimwe nzira kuunza chokwadi ichi kuti chiedza. Saizvozvowo sezvaakaitira John Darby nemashoko yekubvutwa uye kudzoka kwaJesu.
Tiri kumirira raShe kudzoka
P recis shoko inodaidza isu sezvatinomirira kuuya kwaIshe. Hatidi kumirira anokosha vatambi, kana kuti imwe chiitiko chichaitika kuti zvakabatana kubvutwa. Jesu anogona kuuya chero nguva, riri kurudziro uye kukurudzirwa kuti Ishe ane kwatiri. The Kugara tarisiro kuti Jesu anogona kudzoka chero nguva.
Zvakanga Paul kunyaradzwa kuchechi muTesaronika, uye sezvinongoita kuti zvinonyaradza kwatiri. Tiri kumirira kuti auye, kuti anunure uye atiponese kubva pakutsamwa kuchauya (1 VaTesaronika 1:10)
Paul Boyer, Kana Time Vachava No More: Uprofita Kudavira Modern American Culture (Cambridge, MA: Belkndap Press, 1992), peji 75th
Paul N. washington, Understanding End Times Uprofita, 1955 peji 197-198)
Tommy Ice, "Morgan Edwards: A Pre-Darby Rapturist," The weConservative Theological Jounal, 1997 peji 4-12.
Dave MacPherson, The Risingadaviriki Pre-Trib Origin, 1973
The Mufudzi Hemasi, A kopi complte zvinyorwa The Sherherd pakati naHerimasi anogona kuwanikwa paIndaneti.
"St. Ephraem 'muna Catholic Encyclopedia paIndaneti
Crutchfield "The Blessed Tariro uye Mudambudziko muna Apostolic Fathers, peji 88-101
Paul N. washington, Understanding End Times Uprofita, 1995 peji 10-12
The First Epistle of Clement, 23 (zvakanyorwa pamusoro 96 AD)
John F. Walsvoord, The Kutorwa Mubvunzo Revised uye Yakakura Edition, Zondervan, Grand Rapids, 1979, 51st
Jesse Silver Forest, The Lords Dzokai, New York 1914, 62-63
Akaramba kubva paawa "peji 221-222
D and Ndiyo cheshanu dzinoti "kudzoka kwaJesu asati kutambudzika," izvo chitaviridzo kuti kubvutwa mwenga raMwari uye neungano vasati kusvikira wokupedzisira vhiki dzemakore, uye Mudambudziko anowana kutanga kwayo.
Kunyange zvazvo pakubvutwa ndechimwe chezvinhu kuna NT uye Assembly zvakavanzika, saka tinogona kuona dzvuku rakakoshwa kuburikidza nemifananidzo uye nezviratidzo GT. This post anotora pokutangira iri nyaya kuti Enoki, Roti, Rabheka naIsaka, Ruth, Rakabhi, uye Daniel, uye rinoratidza kuti Jehovha ane chokuita nokutambudzika uye Assembly. Tinotanga sokutevedzana nyaya Enoki:
E Change chiri munzira dzakawanda mutana testamentlig Pre-pena of Assembly, iyo inogona kuva tsigiro zvose pakuzvarwa pacharo, asiwo nguva-nguva yokuti kubvutwa ungano.
Pasina chiso rufu
VaHebheru 11: 5 - Nokutenda Enoki akatorwa kubva pasina kusangana rufu. Uye vakati vamuwana akasawanikwa nekuti Mwari akanga atora naye.
E NOK chakabatwa pasina anoravira rufu Mwari rwaakatora iye amene. Aripiko Enoki tarenda anoyemurika muungano vane vimbiso chete zvinoshamisa.
Kuti rimwe zuva rudzi rwakasarudzwa, kuti ndokutorwa kumusoro kuna Ishe, asi nechiso rufu, uye pamwe avo kare vavete, isu vachiri vapenyu uye vakasara, tichabvutwa munaShe kusangana naye mudenga.
D and vaiva yakasiyana siyana matatu vanhu vaigara mumazuva aNoa mafashamu asati asvika. Maiva vasingatendi vakaramba shoko raJehovha, apo vose ukapararazve kwemafashame. Yaiva Noa nemhuri yake vakachengetedzwa kuburikidza Mafashamo, uye aiva Enoki akanga ndokutorwa kumusoro kuna Ishe mafashamu asati asvika.
Mumwe nomumwe nenzira yavo inomiririra vanhu ivavo Mapato matatu akasiyana kuti isu angaenzaniswa nguva yedu nhasi. In chete Saizvozvowo tinoona mhando nhatu vanhu pazuva kana tiri kutamira akananga kutambudzika uye nekuguma nguva.
M änniskorna uyo vakaparadzwa mafashamo raNoa rinomirira vasingatendi, vasina kubatwa kuna Jesu somuponesi yavo. vanhu ivavo vachaenda kutambudzika, uye pachena hasha dzaMwari. Avo vasingadaviri apfidze yeKutambudzika vachatongwa naJesu uye ipapo ugokandwa romoto romoto.
Noa ndiye Israel
N OA anomiririra vakasara vaIsraeri kuti Jehovha achapedzisa mhiko dzavo-makore 1000 Reich. Noa saizvozvo vakatsaurwa kuvaIsiraeri, izvo mune imwe nzira achadzivirirwa munguva yokutambudzika. Makore 3.5 kupinda yeKutambudzika zvichaita vaJudha vanotenda zvitizire gwenga Ishe achadzivirira pavo kwaAntikristu vake kutambudzwa. Noah akanga akachengetedzwa kuburikidza mafashamo uye achava pane chikamu vanhu vechiJudha kuti.
Enoch ari mufananidzo weungano
E NOK mufananidzo weungano, vakanga vasiri chikamu Mafashamo uye pakutonga kwaMwari kana chinozadzwa akabatwa uye kutorwa naMwari mafashamu asati asvika.
Enoki akararama munguva imwe nguva apo Jehovha akatonga nyika. Kana chinangwa chivi wacho asvika, akasvika kutonga kwaMwari chivi muzuva raNoa uye akatumira pemafashamo, asi zvino akanga Enoki kare wakakwidzwa Ishe. Mafashamo ndiye achatuma panyika mufananidzo kwaMwari, uye vakaipa vanhu pakupedzisira nguva - hasha dzinouya (1 VaTesaronika 1:10). Sezvo Inoki, muchagarawo Assembly kuti kubvutwa ayo vredenstid asati anobuda pamusoro penyika.
2 Petro 2: 6-9 - The maguta eSodhoma neGomora akashora chose. Akavaisa mumadota uye akapa muenzaniso zvaizoitika kune vakaipa. Asi iye akaponesa Roti akarurama, uyo akanga anoshushikana vakaipa ndararama upenyu. - The akarurama akararama vaiti pakati pavo, uye zuva nezuva, akatambudzwa mumwoyo wake wakarurama nezviito vachiona uye vachinzwa vakaita zvakaipa. - The Ishe unoziva kusunungura vanonamata Mwari pamiidzo, nekuchengetera vasakarurama kusungwa uye arange kusvikira pazuva rokutongwa pavo. shanduro Chirungu: kununura vakarurama muedzo
N Petro anonyora uye anodzidzisa chechi imwe yetsamba dzake, iye anoshandisa muenzaniso Roti sechinhu kumumvuri, uye anotipa rinoshanda muenzaniso nzira kuti Jehovha anoponesa vanhu vake kubva nguva uye nzvimbo panyaya kutonga kwaMwari uye kuti nguva yomuedzo ( kubva muedzo - sna rokushandura).
Abraham anoyeuchidza Ishe
1 Genesisi 18: 23-25 ​​- Zvino Abhurahamu wakaswedera, akati, "muchaparadza vakarurama pamwe chete navakaipa Zvimwe varipo vakarurama makumi mashanu mukati meguta Ungada here kuparadza mukasaregerera nzvimbo nekuda kwevakarurama makumi mashanu vari?. ipapo? kuti kure kuita chinhu chakadaro, kuti vakarurama vanofa pamwe nevakaipa. zvingadai ipapo kubatana chete nevakaipa. ngazvive kure, asingadi iye nyika mutongi zvose zvakarurama ? '
A Braham Ishe akayeuchidza avo nharo pamusoro peSodhomu neGomora, zviri zvinopesana nechisikirwo ake kuparadza vakarurama pamwe nevakaipa.
Kutipa muenzaniso Roti, anodzidzisa aPetro, kuratidza kuti Roti akanga asiri kwekanguva Somuenzaniso, asi musimboti kubva kudivi raMwari, Ishe nguva dzose "anoponesa vanonamata Mwari pamiidzo"
Ishe anotorera Roti muguta
D and sezvo Jehovha akaponesa Roti kubva mukutongwa kuti kubuda muguta, wakange kumumutsa panyama muSodhoma. Ishe aisagona kungoenda musatonga guta uye kuita chimwe chinhu nokuda refu zvokuti Roti akanga panyama muguta.
Roti mufananidzo ungano, iyo inotorwa nguva uye nzvimbo pamberi ipapo kuti kutonga kwaMwari unodzima. Zviri, nemamwe mashoko raShe zvisikwa kwete achatonga akarurama pamwe nevakaipa.
1 Genesisi 17: 4 - "Tarirai, iyi ndiyo sungano yangu newe: Uchava baba vendudzi zhinji.
1 Genesisi 17: 6 - ndichakuita iwe yakaorera kwazvo, uye kuti marudzi zvinobva kwamuri, uye madzimambo vachauya kwauri.
In Saks aberekwa, akanga ari kuzadzika kwezvipikirwa zvaMwari kuna Abrahamu. Ishe vakavimbisa Abhurahama mwanakomana Sara, uye Abrahamu aizova rudzi rukuru, uye baba vemarudzi mazhinji kuburikidza naIsaka.
Ishe anoedza mwoyo waAbrahamu
N ndiye Sara ava namakore makumi mapfumbamwe achabereka, iye akapikira mwanakomana wake yokukwegura kwake, chete nenzira Ishe akanga avimbisa Abrahamu naSara. ipapo Isaka chete mwana wavo, kuti dai Ishe azadzise sungano yake nezvaachavaitira kuburikidza.
Kwapera nguva kuedza Ishe mwoyo waAbrahamu, uye tomukumbira kuti aende rwendo rwamazuva matatu kure, kuti vabayire. Chinopiswa paaritari aizova Isaka, mwanakomana wake chete uye anodiwa.
Isaka, mufananidzo waKristu
N Abrahamu anoteerera kuna Ishe, saka ndiyo yose chiitiko mumvuri zvakaitwa naMwari pamuchinjikwa anenge 2000 pemakore, uye pane yakawanda nhoroondo hunoratidza kuti Isaka ndiye Kunyatsoona Jesu Kristu:
Ishe akadana Isaka, "chete mwanakomana" waAbrahamu, kunyange zvazvo Abrahamu akanga atova nevanakomana vaviri panguva. Saizvozvowo, Jesu ndiye chete mwanakomana waMwari. (1 Genesisi 22: 2)
Isaac kwaizoratidzwa zvibayiro panzvimbo Jesu akabayirwa paKarivhari kukwirira. (1 mos 22:14)
Rwendo kunzvimbo chibayiro akatora mazuva matatu, sezvo Jesu akanga ari muguva kwamazuva matatu nousiku hutatu. (1 Genesisi 22: 4)
Isaac bhaa pacharwo huni dzechibayiro chinopiswa kunzvimbo, sezvakanga Jesu akatakura ake muchinjikwa yokupedzisira mugwagwa kuyambuka. (1 Genesisi 22: 6)
Abrahamu naIsaka vakafamba pamwe chete uye konzati, saizvozvo kuti Baba noMwanakomana vakanga vari kubvumirana. (1 Genesisi 22: 8)
Saka Isaka Kunyatsoona Jesu, uye basa zvakaitikawo pamuchinjiko weKarivari. Abrahamu aivimba zvizere naJehovha ezvinhu, uye vakatenda Mwari kuti Isaka kuti atangezve zvakare pashure akuvara.
The muranda Eriyezeri - mufananidzo Mutsvene
1 Genesisi 15: 2-3 - Asi Abhuramu ndokuti; "Ishe, Ishe, chii muchandipei? . Kuona Ndinoenda mwana, uye kuti mudyi wenhaka yeimba yangu ndiEriezeri weDhamasiko "mberi Abhuramu ndokuti; "Tarira, handina yakabereka chero vana. Mumwe mhuri yangu achandipa nhaka. "
S unifier apo Isaka kuwana mwenga, Abrahama anotuma muranda wake mukuru mu rokuchenesa yake, Eriezeri kuwana mwenga Isaka, pakati mhuri yake. Hakuna yose nyaya muChitsauko 22, tinoona zita omuranda. Asi muna 1 chitsauko Eksodho 15: 2 tinodzidza kuti mushandi mukuru waAbrahamu ainzi Eriyezeri, uye pakutanga yaiva nhaka kumba yaAbrahamu.
Muna Johane 15: 26-27, tinodzidza zvinhu zvizhinji pamusoro poMweya Mutsvene. Haasi chikamu Baba, uye anopupura Kristu. Ndiye zvakare mubatsiri wedu uye Mweya wechokwadi.
Muranda Eriyezeri mufananidzo Mutsvene. Akanga atumwa Abraham. Akanga kusazivikanwa uye haana kutaura nezvake, asi akapupura pamusoro Rebecca, ramangwana mwenga waIsaka. Saizvozvowo kutaura, Mweya Mutsvene haisi pamusoro pachake, asi achinongedza uye tinopupura nezvaJesu kukereke. Eriyezeri Rebecca patsime remvura, izvo zvinogona mufananidzo Mutsvene kudururwa muupenyu hwedu. The zita Eriyezeri rinoreva zvakafanana Mutsvene "munyaradzi".
Rebecca - mwenga waKristu
P Saizvozvowo kuti Isaka ari mufananidzo waKristu, uye muranda Eriyezeri ari mufananidzo Mutsvene, Rabheka uri mufananidzo weChechi, Mwenga waKristu.
Rebecca rinobva chete guta saAbrahamu, uyo akabva akarara muBhabhironi. Bhabhironi mufananidzo ino, ndiye vo kereke kuda uye yatorwa panze. Rebecca zvakare hama yaAbrahamu, uye kwakafanana nevaKristu vose pakunamata kutaura, mbeu yaAbrahamu. (Rome 4:16)
Ribhekawo kugashira zvipo Eriezeri apo iye akasangana naye, iyo Mweya Mutsvene nenzira imweyo, kuti Assembly Nyasha dzemutendi maererano nechido. Apo Rebecca akataura kumuranda, iye anomhanya kumba uye rinotiudza zvose rakaona uye ruzivo. Basa Assembly ari kubuda uye kutaura "mashoko akanaka" uye kupupura zvose Ishe akaita muupenyu hwedu.
Kununurwa kubva usiku
T jänaren Eriezeri anosvika manheru kusvikira kutsime muguta apo Rebecca mupenyu. Usiku chinofananidzira nyonganyonga, mhirizhonga uye nenyonganyonga, apo usiku hunouya, inova mufananidzo Mukutambudzika Zuva raShe.
Tiri kuzviona saizvozvo muna 1 apo Isaka paanosangana mwenga wake ari manheru Genesisi 24:63,. Achagamuchira naye, uye anobudisa yake muruoko ramai vake tende, apo Rabheka anova mudzimai waIsaka.
A yakachena mhandara kuna Kristu
V kudzidza kuti Rebecca ane musikana muduku, akanga auya hapana pedyo (1 puree 22:16). Saizvozvowo, ungano yakachena mhandara kuna Kristu, uye wakanyengwa mumwe murume.
Panoperera nyaya, mumwe puree 24: 62-67, tinoona kuti Isaka (chikomba) anodzokera manheru, pamberi usiku (yeKutambudzika), uye Eriezeri (Mweya Mutsvene) kuda kuuya (kubvutwa) Rebecca (mwenga) kusangana Isaac chiso nechiso kekutanga. Saizvozvowo, Mweya Mutsvene, yokudzura ungano, manheru, ayo usiku uye kutambudzika isati yatanga, uye isu achawana kuona uye kundosangana naShe chikomba chedu kokutanga.
Joshua 1: 2. - "Muranda wangu Mozisi afa zvino simuka, Joridhani, iwe navanhu ava vose, muende kunyika yandinovapa ivo vana valsiraeri.
H istorien Rakabhi wakaiswa anenge makore 500 pashure Isaka Rebecca muna Genesis Chapter 1 24. zvakazadzika, zvizhinji chaitika Israeri panguva iyi.
Isiraeri akaona nguva muuranda muIjipiti, uye zvino sei Ishe nenzira inoshamisa akasunungurwa uye akaponesa vanhu kubva muusungwa naMosesi. Mushure vechiJudha vanhu akadzungaira murenje kwemakore 40, akafamba Ishe kukwira Joshua, uyo aizotungamirira vanhu kukunda muvengi uye kutora akavimbisa nyika yechipikirwa kuti Mwari akanga avimbisa.
Two vasori Jeriko
Jos 2: 9 - "Ndinoziva kuti Jehovha wakakupai nyika ino uye kuti kutya imi Rawa pamusoro pedu, uye kuti vagari vose vanotya kwamuri.
In efore kuti Israeri inoremekedzwa Jeriko, tsori mbiri akatumwa kuti vanosora nyika uye guta reJeriko. Vasori Vaisangana uye vanopotera pamwe chifeve Rakabhi, anovanda vasori vaviri vabereki guta avo vaitsvaka vanhu.
Rakabhi vanoti kutenda kwake uye chivimbo chake nokuda vashori, Mwari waIsraeri akapa nyika. Okubvunza sei vasori kumupa Chipikirwa chokudzivirirwa, zvose yake nemhuri yake pazuva Israeri inoremekedzwa guta.
Kununurwa kubva pakutonga
E tt dzvuku tambo pahwindo, yaizova chiratidzo chokuti akanga apo Rakabhi nemhuri vakaungana. Apo varwi Israeli akaona tambo, paIndaneti uye akavaponesa Rakabhi nemhuri kubva pakuparadzwa sezvakanga vasori amuvimbisa.
A mufananidzo weungano
S Kokan Rakabhi ari mufananidzo weungano. Iye yechihedheni, pfambi uye mutadzi achireurura kutenda kwake muna Mwari waIsraeri. Iye ane hanya, apo kunzwa kuti vanhu vechiJudha, inova chikonzero ruponeso wake.
Jeriko mufananidzo ino, iyo yachengetwa kwavari. Rakabhi (Assembly) rinobviswa Jeriko (World), pamberi ipapo kuti guta rakaparadzwa uye akapisa (yeKutambudzika)
R Uzi bhuku rinonzi "nerudzikinuro Love Story," uye riri pamusoro Naomi, mumwe mukadzi muJudha kubva kuBheterehema vanorasikirwa nyika yavo nokuda kwenzara muIsraeri, uye ipapo zvakamanikidzwa kutizira Moabhu (Jordan).
Nguva pfupi pashure pacho, murume wake akafa uye akasiya wake oga uye murombo mune imwe nyika. Mushure nzara jana Naomi akadzoka kuBheterehema nomwanasikana wake Ruth, uyo akapika kumbobvira kumusiya. Rute mukadzi wechiMoabhi akanga awana mumwe wevanakomana Rute uyo akaurayiwa. Kana vaviri vari shure muBhetrehema, saka kuva akakurumbira muJudha murume, Bhoazi, kuda Ruth uye akamuwanisa.
Nomurayiro kudzikinurwa uye muchato, tinowana zvose Naomi naRute nerudzikinuro, uye Naomi kudzokera kunyika yavo, akanga akarasika.
H istorien raRute zvinoshamisa nyaya yokuberekwa, ruponeso uye neruregerero, asiwo rinopa kwokufananidzira mufananidzo ungano uye kutambudzika.
Naomi ari mufananidzo waIsraeri, uye Rute mufananidzo Assembly vahedheni uyo takaroorana förlösaren, murume rechiJudha Bhoazi, uyo ari mufananidzo Mesiya. Naomi aifanira kutiza nyika yavo nemhaka yenzara, sezvakanga vaIsiraeri akadzingwa nyika yake makore 2000 akapfuura. The chechi yakanga chikamu kwaMesiya nevaJudha muchitenda, apo vakaomeswa mwoyo njodzi chikamu vaIsraeri (VaRoma 11:25).
On munzira waizodzikunura vaIsraeri (Naomi), saka tora Mesiya womuchato yechihedheni (Rute). Bhoazi anodzikinura uye anoponesa vose Rute naNaomi ari mamiriro ezvinhu vari, uye anovamba pakupedzisira Israel (Naomi) zvakazara.
Kununurwa kubva pakutambudzika
S amtidigt saizvozvo nyaya yaRute, mufananidzo kereke kuti Jehovha anoponesa kutiza nokutambudzika.
Tinosangana ezvinhu matatu muchitsauko zvitatu zvinopupura izvi. Chokutanga, Rute anoburukira tröskeplatsen sezvo amai akamubvunza. Chechipiri, Bhoazi paakamuka akaona Rute ari pakati pousiku nguva apo iye akatizira naye. Chechitatu, Rute paakasvika mvumo kuvanda pasi nguvo Boas , vanoparadzira nhere pamusoro wake, uye Bhoazi akava Mudzikunuri wake usiku huno.
Tröskeplatsen - A mufananidzo yokutambudzika
T röskeplatsen mufananidzo mutongo uye kutambudzika takatarisana akawanda nzvimbo zvose mutestamende yekare (Amosi 1: 3, Isaya 21:10, 41: 14-16, Zvakazarurwa 14: 19-20).
Usiku uye mangwanani ndiyewo mufananidzo vaviri Mukutambudzika, Kutongwa uye kudzorerwa. Jesu akataura usiku kuuya apo pasina munhu angagona kushanda (Johani 11: 9), uye Pauro anonyevera kuti zuva raShe, inova nguva yokutongwa richauya sembavha usiku (1 VaTesaronika 5: 2).
Munguva Boas nejasi unodzivirira
Ruth 3: 9 - "Ndiwe ani?" Akabvunza. Iye akapindura kuti: "Ndini Rute, murandakadzi wenyu. Kuparadzira manteflik kwenyu pamusoro murandakadzi wenyu, nokuti imi muri noMudzikinuri wangu.
R kunze aifanira kuvanda pasi nguvo Boas patsoka dzake kusvikira usiku aitarisira uye yakanga mangwanani zvakare.
Saizvozvowo, Jehovha achadzivirira uvande ungano yake munguva kutsamwa, rinotevera usiku, kusvikira murima akaparadza uye mangwanani parinouya. nzvimbo Assembly munguva yokutambudzika, vachava pasi Jerusarema rekudenga jasi raShe, uye pasi patronage ari yokudenga makamuri.
Uyai vanhu vangu uye uende dzako dzomukati
Isaya 26: 17-21 - Kana mukadzi ane pamuviri squirm kana iye ari kuda kusununguka, uye kudanidzira kurwadziwa kwavo, saka zviri kwatiri kwamuri, O Ishe. We mimba uye mukurwadziwa, asi isu akabereka mhepo. Hatina atambira ruponeso nyika, uye hapana munhu anoberekerwa kurarama panyika. Asi wakafa wenyu vachararama; miviri yavo ichamuka. Muka uye vachiimba, imwi kurarama muguruva, nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza; nyika achapa kubva kuvakafa. Uyai vanhu vangu uye kupinda kwako makamuri, akapfiga mikova shure kwenyu. Vandai kwenguva duku kusvikira kutsamwa kwapfuura. Nokuti tarira, Jehovha unobuda panzvimbo yake kurova vagere panyika nokuda kwezvivi zvavo. Nyika achafukura pachena ropa ravo zvikwereti uye haachazozvivanzizve vakaurawa navo.
D and chitsauko chino chaIsaya ine ndima zvinoshamisa kuti ndipupurire Jehovha ndiani kukoka vanhu vake, iro achandichengeta uye kuchengetedza ravo makamuri maererano nehasha nguva akaisa panyika.
Hatigoni kuona kuti chikamu ichi kubva Isaya nokusingaperi pamberi hwakazadziswa. Zvinoita wo haana kubvumirana kumuka kuti Jesu akaparidza, uye Daniel anoudza Dan 12: 2, zvatinoziva chichaitika pashure Mukutambudzika kwete pamberi. Pano Isaya anotaura pachinzvimbo kumuka kuti kwokutanga chinoitika apo Ishe anodana vanhu vake avo makamuri, uye napamberi napamberi kutsamwa kwaMwari uye nezvakatongwa anobuda pamusoro penyika.
Somukadzi ane mimba
Zvakazarurwa 12: 1-6 - A chiratidzo chikuru chakaonekwa kudenga: mukadzi akanga akapfeka zuva, uye mwedzi uri pasi petsoka dzake, nekorona ine nyeredzi gumi nembiri pamusoro wake. Anepamuviri uye akadanidzira uye achitambudzika pakuzvara.
P ari saIsaya, John anoona mukadzi chokuita yokuguma pamuviri uye anopona. Kereke iri kumbobvira anounzwa somukadzi anopona ari muBhaibheri, asi zvinoita Ukuwo, Israel. Mukadzi ari mufananidzo zvose vaJudha hwaMesiya nguva yaJesu, uye vaJudha hwaMesiya munguva yokutambudzika.
Israeri ane kuzvarwa matatu iye ane kuenda kuburikidza asati achipinda 1000 gore umambo. All vatatu pakuzvarwa izvi zvinorondedzerwa muna Isaya chitsauko 66:
Isaya 66: 7-8 - Before Zion takaziva munhu unosurumuka, iye anobereka mwana (Jesu). Marwadzo asati asvika pamusoro wake, iye abereka mwana mukomana. Ndianiko akambonzwa chinhu chakadai? Ndiani akamboona chinhu chakadai? Anogona nyika kutoitika nezuva rimwe chete (1948), kana rudzi kuberekwa kamwechete (kuponeswa kwaIsiraeri), nekuti Ziyoni kubereka vana vavo kare kana kurwadziwa kutanga?
Saka, maererano kutambudzika kuti Israeri achaona, uye pamberi hasha nguva, Jehovha rega vakafa vanomutswa, uye Achashevedza vanhu vake pachake, kuvanda mukamuri yake.
John unomirira kereke iyi kuti richawana chete pazuva uppryckandets. Kuburikidza murayiro, inzwi rengirozi huru uye nehwamanda yaMwari, ungano achabatwa akakwidzwa kudenga uye vachaona nokutambudzika petenura pasi.
H istorien pamusoro Daniel uye varume vatatu romoto mumwe nyaya yekare kuti anoratidza zvakajeka pakutambudzika uye remangwana kupera.
Daniel inonyikwa kwemugumo, hope, zviratidzo uye chii chave kupera nguva kuita. Kusiyana Mubhuku raZvakazarurwa, inova rondedzero yakatodzama mukutambudzika, kutangira Daniel pamusoro yakareba nguva jengachenga, zvose mberi neshure kwenguva.
Daniel - mufananidzo ungano
H istorien pamusoro Dhanieri neshamwari dzake nhatu, kunoitika pakutanga eBhabhironi pakutapwa, apo zvose zvina kushumira panguva mambo muBhabhironi.
Sezvo Josefa, Daniel yava kwakasimudzirwa munzvimbo kuti chete mambo amire pamusoro pake. Muna Zvakazarurwa, chechi iri kuisa kuti vave vapristi uye madzimambo enyika ino. Chinhu kuti zvichazadziswa muMireniyamu. Nenzira iyoyo, uyu Daniel mufananidzo ungano.
K Young Nebhukadhinezari, inova muenzaniso wakajeka kwaAntikristu, wakange adzika chifananidzo chendarama mubani reDhura muBhabhironi. It Ona, kuti chifananidzo chinhu matanhatu pakureba uye paupamhi matanhatu, iyo ingafananidzwa kwaAntikristu kutaura 666th
Nebhukadhinezari kumanikidza munhu wose kuwira pasi uye kunamata ichi chifananidzo yakatarwa, apo chaitika vaya kuteerera zvaifanira kukandwa muvira romoto. Unopfuta kwazvo mufananidzo kwaMwari uye kutambura kukuru mukutambudzika.
Kukandwa muvira romoto.
Maraki 4: 1 - Tarirai, zuva rinouya, izvozvo sechoto.
S adrak, Misheki, naAbhedhinego vakaramba kukotamira chifananidzo chaNebhukadhinezari, vakakandwa muvira romoto.
Mambo akarayira kuti vira anofanira neshungu kanomwe chaizvo kudarika iwe ndamboona kuti, uye pane mufananidzo pakukwana kutaura. Jehovha akatuma ngirozi yake vakadzivirira Shadreki, Misheki naAbhedhinego mu romoto uye vakabuda pasina kukuvara kana kushanda moto.
M one Anoteterera mubvunzo nyaya ino ndiko Daniel ari pane imwe nzvimbo. Ainge mumwe wevaya kufugamira ibvi kuna chifananidzo? Sei akanga asina kupinda, uye nei here akandwa romoto?
Tinogona kuva kumbonyanya nechokwadi kuti Dhanieri haana kufugamira ibvi kuna chifananidzo Nebhukadhinezari. Daniel akanga chete kwete kupa apo munhu wose kuti achinamata, kana panguva unopfuta kwazvo kutambura. Mwari aiva "ndikamubvisazve."
B eskrivningen sezvo mambo akanga varume ava vari romoto wakange kuti paiva nevarume echiJudha (Dan 3:12). Varume vatatu vechiJudha ndechokuti, mune mamwe mazwi, mufananidzo vakasanangurwa vaIsraeri, uye Daniel ari mufananidzo weungano.
Daniel (Assembly), anodiwa (Dhanieri 10:11), rakachengetedzwa kubva nguva uye nzvimbo apo totaura romoto (kutambudzika), apo shamwari dzake nhatu (Israeri vakasara), rachengetedzwa mukati uye kuburikidza trängslen.
G eNom Nyaya idzi waEnoki, Roti, Rabheka naIsaka, Ruth, Rakabhi, uye Daniel, tinogona kuona muenzaniso uye dzvuku shinda.
Tinoona zviitiko dzokufananidzira uchiratidza uye inotaura rokuchenesa, nguva Assembly tiri kurarama. Ikoko tinoona kuti Ishe haadi anoenderana zvakafanana pamwe Church, izvo zvaanoita naIsraeri. Mapoka acho ruponeso Ishe ane zano yakasiyana, raakanga achapedza. Jehovha achachengetedza Israeri ndokufamba kwaAntikristu uye kutambudzika, raakanga achapedza zvibvumirano zvavo uye zvipikirwa kuburikidza.
Zvirongwa yaMwari chechi yake
P pamusoro Saizvozvowo, Ishe kupedzisa ake zvirongwa muviri wake uye mwenga, kereke yaMwari. Kutambudzika haina okugadzirisa mwenga raShe, saka saka Jesu achaita dzosa uye kubvisa mwenga pamberi ipapo kuti kutonga kwaMwari achabuda pamusoro penyika.
Kereke anoponeswa kubva nguva uye nzvimbo panyaya kutambudzika uye mutongo wokupedzisira. Blessed tariro, Mwari wedu naIshe Jesu Kristu, uyo achatiponesa kubva pakutongwa.
Ndapota vanoshanyira Miakel Walfridssons Blogs: